Dr. Tint Swe's Writings: January 2015
Student Union ကျောင်းသားသမဂ္ဂ
မြန်မာပြည်မှာ အမည်ခေါ်တာကို အတော်ကြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ်။ ဦးနေဝင်းက အာဏာသိမ်းကာစမှာ ဝန်ကြီးတွေကိုတောင်မှ တာဝန်ခံဆိုပြီး လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ မကြာပါဘူး၊ ဝန်ကြီးပြန်လုပ်ရတယ်။ အလုပ်သမားနဲ့ တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံး ဆိုပြီး မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ လုပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အခုအစိုးရကလည်း နာမည်သာမတူပေမဲ့ လူတွေကအတူတူမို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတဲ့ သမိုင်းဝင်နာမည်ကို ခေါ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပဲ။ ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ် မှည့်ချင်သလိုမှည့်ပေါ့။ ထိုင်းကိုလည်း ယိုးဒယားလုပ်ထားသေးတယ်။ သူများကိုလိုက် သဝန်တိုနေတာ မကောင်းပါဗျာ။
Students' union ကျောင်းသားများသမဂ္ဂတွေကို တိုင်းပြည်အလိုက် နာမည်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Student government, Free student union, Student Senate, Students' association, Guild of students, Government of student body စသဖြင့် ရှိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ Student body ကို Pinyin Student union နဲ့ Xuéshēng Hùi = Student association လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာတော့ Students' unions လို့ပဲခေါ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာလည်း Studens' unions လို့ပဲခေါ်တယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်း Student union လို့ခေါ်ပြီး၊ Student activity center ကို ရည်ညွှန်းတယ်။
သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ = ညီညွတ်ကြကုန်သောသူတို့၏လုပ်ငန်းသည် (အောင်မြင်၏) ချမ်းသာ၏ လို့ ဓမ္မပဒမှာပါရှိပါတယ်။
Grammar and Spelling ဆရာတင်မိုး မှတ်ချက်
• ကျွန်တော် မြန်မာစာသတ်ပုံအကြောင်းရေးတာကို အားပေးကြသူတွေရှိတယ်။ အမှန်က ကျွန်တော်လည်း မှားတတ်လို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
• ဆယ်တန်းနဲ့ ဆေးကျောင်းဒုတိယနှစ်အထိ မြန်မာစာ သင်ခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းမှာသင်တာတွေနဲ့ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကြောင့် အရေးအသား၊ သဒ္ဒါနဲ့ သတ်ပုံ အတော်မှန်ခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးကျောင်းအတန်းကြီးကစပြီး အပြင်စာအဖတ် နည်းခဲ့ရတယ်။ အလုပ်ထဲရောက်တော့လည်း နည်းတာပဲ။
• နိုင်ငံရေးထဲရောက်တော့ ခဏနဲ့ပြည်ပထွက်ရတယ်။ အပြင်မှာ မြန်မာစာအုပ်ကရှား၊ သူများတွေကို ပြန်ပြောနိုင်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုတွေသာဖတ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုသာရေးရတော့တာမို့ မြန်မာစာနဲ့ အလှမ်းပိုဝေးလာခဲ့တယ်။ ပြည်ပမှာ မြန်မာလို စာအုပ်တွေထုတ်ကြပါတယ်။ စာအုပ်ထုတ်တော်လှန်ရေးလို့တောင် တင်စားခံရသေးတယ်။
• ဒေလီကို ဆရာတင်မိုးလာတုံးက လူငယ်တယောက်ကနေ မေးတယ်။ ဆရာ့့ အပြင်မှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲဆရာတဲ့။ ဆရာတင်မိုးက ပြန်ဖြေတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ စာရွက်သား၊ မင်ကျမင်န၊ စာပုံနှိပ်တာတွေတဲ့။
• ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအထဲကပါ။
• စစ်အစိုးရတွေတက်လာတော့ မူရင်း မြန်မာသတ်ပုံတွေကို ပြောင်းစေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဆေးပညာစာတွေကို စာအုပ်ထုတ်ပေးချင်တဲ့ ထုတ်ဝေသူတယောက်နဲ့ စကားပြောဘူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကပါ။ အေးဗျာ ကျွန်တော့် နာမည်ရင်းနဲ့ဆို ပုံနှိပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က စာရေးဆရာမဟုတ်တော့ ကလောနာမည်လည်းမရှိဘူး။ ဒါနဲ့ နာမည်ဝှက်တခု ရွေးပေးတယ်။ သတ်ပုံတွေကိုလည်း အစိုးရခွင့်ပြုတာနဲ့သာရိုက်မှာလည်းသိပါတယ်။ လုပ်ပေါ့ဗျာ။ ထွက်လာရင် အောင့်သက်သက်နဲ့ဖတ်ရမှာပေါ့လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ် မထုတ်ဖြစ်လိုက်ပါ။ နောက်ထုတ်ပေးမယ် ဆိုသူတွေကိုလည်း အယ်ဒီတာကောင်းကောင်းနဲ့ စာပြင်ဆရာကောင်းကောင်းကို အရင်မေးပါတယ်။
Naypyidaw နေပြည်တော်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း
• အဆောင်ဆောင် နန်းတွေကြငှန်းတွေနှင့်ပျော်၊
• နေပြည်တော်မမြန်းခင်က၊ အောင်ပန်းညှို့ခဲ့မဲ့သဘော။
• လူတွေမှာတော့ ဘေးအပေါင်းကြီးစွာ ဝေဒနာအစုံနဲ့၊
• သွေးချောင်းစီးကာ သေရရှာတဲ့ပုံတွေကပေါ။
• အဟောင်းသံသရာ၊ မကောင်းကံကြမ္မာလုပ်လို့၊
• မဟုတ်တရုတ် တေလေတစ္ဆေကိုက်ခံရတယ်လို့ပြော။
• ညီလာခံဗိုလ်ရှုပွဲတွင်မှ၊ ထိုထိုလူခပဲကို မကြည်ညိုတဲ့၊
• ဝသီအလို တဖြေးဖြေးရူးမဟဲ့လို့၊
• တနွေးနွေးမူးမူးပြီး ခွေးဘီလူးလို အကောင်မိုက်တွေက၊
• ဪ့့ အမှောင်စရိုက်ကယ်နှင့်၊ ပြောင်ပြောင်ဘဲမိုက်မပေါ့လို့ ပြောင်ကိုက်တဲ့သဘော။ ။
(သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မဟာလေးချိုးကြီးထဲကစာသားတွေကို ဖြတ်-ညှပ်-ကပ် လုပ်ထားပါတယ်။)
• ပြောတာ၊ ဟောတာ၊ စာရေး၊ ကဗျာရေးတာကို လူအများကလုပ်ကြတယ်။
• ဝေဖန်ထောက်ပြတာ၊ ကဲ့ရဲ့သဂြုင်္ိဟ်ပြုတာ၊ သရော်တာလုပ်ကြသူလည်းမနည်းပါ။
• ဆုံးမတာ၊ လမ်းညွှန်တာ၊ ဆရာလုပ်တာတွေကိုလည်း လုပ်ကြတဲ့သူများလှတယ်။
• နှုတ်ရေးနဲ့ စာရေးတာထက် လက်ပါကြသူကတော့ ရှားပါးတယ်။
• စင်ပေါ်မှာနဲ့ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ နေရာရသူတွေက လမ်းပေါ်နဲ့ ကွင်းပြင်တွေ၊ မြေပြင်တွေပေါ်မှာ တွေ့ရဘို့ ခက်ကြတယ်။
• စိတ်ပါမှ လက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ စေတနာပါမှ လက်ရာကောင်းတယ်။ ရသပါရင် စေ့ဆော်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ စေတနာမှန်မှ ဧကန်အကျိုးဖြစ်စေတယ်။
• ကာယနဲ့ ဥာဏကိုသာခွဲပြော၊ ခွဲလုပ်တတ်ကြတယ်။ ကံဆိုတဲ့ အတွေး၊ အပြော၊ အလုပ် သုံးမျိုးလုံးမစုံသူဟာ ဆရာမည်ပါသလား။
• စေတနာမှန်နဲ့ ပြောလည်းပြော၊ ရေးလည်းရေး၊ လုပ်လည်းလုပ်သူတွေများပါစေသတည်း။
The Mirror ယနေ့ မြန်မာ့ကြေးမုံ
• တူတယောက်က သူ့ကလေးကို သူပုန်မျိုးတဲ့။ သူပုန်နယ်မှာမွေး၊ သူပုန်လေး၊၊ သူပုန်မြေး၊ အားပေးတယ်လို့ ရေးလိုက်တယ်။
• နောက်တူနှစ်ယောက်က ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာရေးသင်တန်းအတွက် ရန်ကုန်ဆင်းကြသတဲ့။ ငါလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားပြီးလေ့လာခဲ့ရဘူးတယ်။ အမှားကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အမျိုး၊ တိုးရမှာပေါ့။
• နောက်တူတယောက်ကပြောတယ် သူ့နယ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်နေတယ်တဲ့။ အေ့း့ သူများသိအာင်လုပ်မှ ပါးရိုက်တာကနေ အသားအကိုက်တာမခံရမှာ။
• အသိတယောက်က ဆရာရေ့့ အောက်ပြည်မှာတော့ အောက်တန်းစားတွေ များနေတယ်တဲ့။
• အလည်ပြန်သူတယောက်က ဆရာ့့ အညာမှာတော့ အညာတွေများနေတယ်တဲ့။
• အောက်အကျေနဲ့ အညာမြေကြားက မြေလတ်သားများကတော့ အားပြနေကြတယ်။
• နေ့လည်စာ ထမင်းချိုင့်၊ စာရေးရတဲ့လက်ကလေးနဲ့နှိုက်၊
• ဗိုက်ဝရင်တော်လှ၊ စားချင်တာမစားရ နေ့တိုင်းလိုသာပ၊
• မူလတန်းကတည်းကစရတာ ဘဝသင်္ခန်းစာ၊
• ငါကြီးလာရင်ဘာလုပ် ဆရာဝန်ကြီးမဟုတ်၊
• အင်ဂျီအိုကြီး မလုပ်၊ ခရိုနီကြီး မလုပ်။
• လူကြီးတွေပြောနေတာကြား၊ ဟိုဟာပြင်မှာလား သည်ဟာပြင်မှာလား၊
• စစ်သားတဲ့၊ မြစ်များတဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားတဲ့၊
• အသားဖြူဖြူ ဗမာစကားမတတ်သူ၊
• ဒီလူတွေက မိုးပေါ်ကကျ၊ ကျွန်တော့်နေ့လည်စာနဲ့ ဆိုင်ပါသလားဗျ။
• ထမင်းကြမ်းဖြူဖြူ၊ ဆီမကူ ဆားမပါ၊
• အမေ့စေတနာ၊ အဖေ့လုပ်စာနဲ့တိကျ၊
• ဒီမိုကရေစီသာရရင်တော့၊ နေ့လည်စာတမင်းမှာ ဟင်းတခွက်ပါစေရမယ်ပေါ့လို့၊
• တို့မူလတန်းကျောင်းသားဂျင်နရေးရှင်း၊ အားခဲလို့သာတင်း။
- ဓါတ်ပုံ (၁) = Khun San Oo (၂) = April Maung Maung
- စာရေးဖြစ်အောင်စေ့ဆော်သူ = Pauk Sa Jade
- စာကိုပြန်တင်ဖြစ်အောင်စေ့ဆော်သူ = လစ်ဗျယ် ငပျင်း (လက်ပံတန်းမြို့ ၊ ကွမ်းသီးတပင်ရွာ မူလတန်း ကျောင်လေးတဲ့ဗျာ။ ဆန္ဒာရှိရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ထုတ်ကြွားနိုင်အောင် Share ထားလိုက်ပါဦး။ ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အသုံးစားရိတ် ဘီလျံ ၂၆ဝဝ ကျော်ကို (ပညာရေး + ကျန်းမာရေး) အသုံးစားရိတ်တွေကမမှီပါဘူး။ ယနေ့ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ၁၁ ချက်ထဲမှာ ပညာရေးအသုံးစားရိတ် ၂ဝ% ပေးရမယ်ဆိုတာ လွန်ပါသလား။ မှားပါသလား။ လိုအပ်ပါသလား။)
Spelling Comments (2) သတ်ပုံ ကွန်မင့်များ (၂)
ကွန်မင့် = အကို၊ အမလို့ရေးတာ သဘောမကျပါဆရာ။ သတ်ပုံကျမ်းအတို်င်း အစ်ကို၊ အစ်မလို့ရေးတာပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ အကျိုးကို မလိုချင်ရင် အကြောင်းကို ရှင်းမှရမှာမို့ သတ်ပုံကျမ်းကို ပြင်စေချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လို်က်ပြင်ရေးပါမယ်ခင်ဗျား။ တစ်ယောက်လို့ရေးတာ ဘာဖြစ်လို့မှားတယ်ဆိုတာ အချိန်ရရင်ရှင်းပြပါလားဆရာခင်ဗျား။
- အစ်ကို၊ အစ်မလို့ရေးတာ သဘောမတူတော့မရှိပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ အကို-အမလို့လည်း အများကရေးလာနေတယ်။ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံ။ ဖြစ်နိုင်တာက ကပြားလူမျိုး (ကုလား) တွေက အာ့ကို၊ အာ့ကိုကြီးလို့အသံထွက်တာမို့ မြန်မာစစ်စစ်တွေက အ တလုံးတည်းသံကို ပိုပြောရာကနေ ရေးလာကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အထင်ပါ။
- တ တလုံးတည်းကနေ တစ်ရယ်လို့ဖြစ်လာတာက ဦးနေဝင်းကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အမျိုးသားပညာရေး လောကတွင် ဦးဖိုးကျားသည် ကျော်ကြားသောခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်သည်လို့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၇၊ စာမျက်နှာ ၂၉၂-၂၉၃ မှာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာစာပေလောက၌ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ပုသိမ်မြို့ တိုင်တရာ စကောကရင်ကျောင်းတွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားလို့လဲ စွယ်စုံကျမ်းမှာပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ထဲမှာမို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦး၊ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာလ ထုတ် မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉ မှာ သာရဝေါစိုးကြည်ရေးသားတဲ့ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား ဆောင်းပါးမှာ ကျောင်းနာမည်ဟာ တိုင်တစ်ရာ ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ မြန်မာသစ်ရသစုံမဂ္ဂဇင်းဟာ စာပေတန်ဘိုးအတွက် အားထားရတဲ့အတန်းအစား ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ခေတ်က ထုတ်ဝေတာဖြစ်လို့နေမှာပါ။ မြန်မာ့ပညာရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သူရဲ့ ကျောင်းနာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ကတည်းက အမျိုးသားပညာရေးဟာ ကျဆင်းဆုတ်ယုတ်လာတာဖြစ်တယ်။
- ဦးနေဝင်းလုပ်လိုက်လို့ ဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ဝတ္ထု ဘုန်းမောင်တယောက်ထဲရယ်ကနေ ဘုန်းမောင် တစ်ယောက်ထဲရယ် ဖြစ်မှသာ ပြန်ထုတ်လို့ရတော့တယ်။ အလားတူ မင်းဆွေရဲ့ ဒါးက ဓါးဖြစ်သွားတယ်။ စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း ငမဲက ငမည်း ဖြစ်လာပြီး၊ မြတ်ထန်ရဲ့ နှောင်းတမြေ့မြေ့က နှောင်းတမြည့်မြည့်ဖြစ်လာရတယ်။
- စွယ်စုံကျမ်းမှာ ထိုင်းလင်းနိုင်ငံလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး၊ မြန်မာတို့က ယိုးဒယားနိုင်ငံလို့ခေါ်ကြောင်းရေးထားတယ်။ နှစ်ခုလုံး မှန်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ အလယ်တန်းကျောင်းသား ပထဝီနဲ့ သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာ Siam (ဆိုင်ယမ်) လို့ရေးပါတယ်။ နောက်မှာ Thai/Thailand ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲတာကို ဦးနေဝင်းနောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကစပြီး၊ ယိုးဒယားလို့သာရေးမယ်လို့ အမိန့်နဲ့သတ်မှတ်လာခဲ့တယ်။ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအရဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအမည်ကိုသာ ကိုယ်ကသတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ သူများတိုင်းပြည်ကိုသတ်မှတ်တာ မသင့်ပါ။ ထိုင်းတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတို့ကို (ဖါးမ) (ဖါးမား) လို့ခေါ်တယ်။ ဖါမတော့ မဟုတ်လောက်ပါ။
- ကနေ့ထုတ်ဝေခွင့်ရတဲ့ သတ်ပုံစာအုပ်၊ အဘိဓာန်စာအုပ်၊ ပုံနှိပ်စာအုပ်တိုင်းမှာ ပြင်ထားတဲ့သတ်ပုံတွေသာတွေ့ရပါမယ်။ စစ်အစိုးရတွေမတက်ခင်က အစိုးရထုတ်စာအုပ်တွေကိုသာ ကျွန်တော်က မှန်တယ်ထင်နေတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာစာကို ၁၂ တန်းအထိသာသင်ခဲ့ရသူပါ။
- ကျနော်-ကျမကို ပိုပြီးလူကြိုက်များလာတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတဲ့အနေနဲ့ ရေးတာပါ။ ကြာရင် ပြင်ဖြစ်မလားမသိပါ။ ဆြာကိုလည်း ရေးထားပါသေးတယ်။ ရှေးကျတယ်။ ဗေဒင်ဆရာ၊ သိုက်ဆရာကိုသာ သုံးပါတယ်။ မိုဃ်းလို့ရေးတာလည်း မှားတယ်။ (သူမ) ကိုလည်း စောစောလေးက ရေးလိုက်ပါတယ်။ (ရေသူမ) သာရှိတယ်။ အဲတာတောင် စာလိုတော့ရေးတယ်။ တကယ့် (မားမိတ်) ဆိုတာမရှိပါလို့။
- ဆရာ-ဆရာမတွေကို အပြစ်တင်တာ မသင့်လှပါ။ ပညာထက် အာဏာကအစွမ်းထက်တဲ့ခေတ် မကုန်သေးပါဗျာ။ အာဏာနဲ့ အရာရာကို မှားမှားမှန်မှန် အမိန့်နဲ့လုပ်ထားပါတယ်။ ပညာတတ်တွေထဲမှာလည်း အကြံပေးခန့်စာမျှော်သူတွေက မနည်းပါ။ ဥပမာ သမိုင်းမှာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းလို့လူမျိုးက ရှားလှတယ်။
Spelling Comments (1) သတ်ပုံ ကွန်မင့်များ
• ပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တခုတွေ့လို့ ရေးလိုက်ရပါတယ်၊ ဆုလို့။ စု = စုစည်း၊ စုတေ၊ စုပုံ၊ စုပြုံ၊ စုဘူး၊ စုရုံး၊ စုလစ်မွမ်းချွန်၊ စုလျားရစ်ပတ်။
• ကလေးအမေဖြစ်တော့မဲ့ တယောက်က မွေးပြီးသောက်သင့်တဲ့ သားဆေးလို့မေးတာကို တားဆေးလို့ ပြင်ပြီး ဖြေလိုက်ရသေးတယ်။ ကလေးကမမွေးရသေးတော့ သူ့သားအတွက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်လိုက်ပါတယ်။ မမှားကောင်းပါရဲ့။
• သူများအမှားတွေလိုက်ရှာကာ အခုစာရေးနေချိန်မှာ အားလုံးကမှန်နေကြလို့ ဝမ်းသာတယ်။ ကျွန်တော်မှာလည်း ပြင်ပေးကြပါ။
• ကျွန်တော်တင်တဲ့ ဇာတိရွာအောက်မှာရေးပါတယ်။ အိမ်တိုင်းမှာ ကြက်မွေးထားတယ်ဆိုတော့ ဧည့်သည်အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့ဆရာတဲ့။
• ကျွန်တော်ကပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ မြို့သွားနေတဲ့ ကျောင်းသားတယောက် ရွာပြန်လာတော့ ဟိုအိမ်သည်အိမ်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးကြတာပေါ့။ သူ့အကိုကပြောမယ် မောင့့် ရာ မင်းလည်းပြန်သွားရော တို့ရွာမှာ ကြက်သံကို ဆိတ်သွားတာပဲတဲ့။
February 13 ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့
• ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၂) ရက်နေ့ဟာ လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့အတူ အရေးကြီးတဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်တယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးများနေ့ဖြစ်တယ်။
• အဲဒီနေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကိုတော့သတိမရကြပဲ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၄) ရက်နေ့ကိုဘဲ သိနေကြသူတွေကို အဲလိုလူတွေတော့ မကျန်းမာလဲနေပါစေလို့ပြောရင် ပြောတဲ့သူကိုသာ အပြစ်မြင်ကြလိမ့်မယ်။
• ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄ ရက်ကို စိန့် ဗယ်လင်တိုင်းနေ့လို့ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေက အေဒီ ၅ဝဝ ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၆၉ မှာ ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးက သူတော်စဉ်ပြက္ခဒိန်ထဲကနေဖျက်လိုက်ပေမဲ့ ကနေ့အထိ အသဲပုံ၊ မြားနတ်မောင်ပုံတွေနဲ့ အချစ်လက်ဆောင်တွေ (ပန်း၊ ကပ်ပြား) အပြန်အလှန်ပေးကြတယ်။
• တနှစ်က ဒီအကြောင်းလေးသတိပေးတော့ လက်ဆောင်ဆိုတာ ချောကလက်ဆရာလို့ ဖေ့စ်ဘွတ် ဖရင်းတယောက်က သင်ပေးပါတယ်။
• ပိုတဲ့သူတွေကပိုပါသေးတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်ကို Happy hug Day ဖက်လဲတကင်းနေ့တဲ့။
• ခုတလော ရိုင်းတဲ့အပြောအဆို ခေတ်စားနေလို့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပဲပြောပါရစေ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်မွှေးတွေကို ပုံဖေါ်ရင် ယောက်ျားတွေက ဟစ်တလာ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ချာလီချက်ပလင် နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေလုပ်သလို မိန်းကလေးတွေက သူတို့ ကိုယ်မွှေးပေါက်ရာမှာ အသည်းပုံဖေါ်ပြီး၊ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အတွက် စပါယ်ရှယ်လုပ်ကြပါသတဲ့။
• မရိုင်းကြပါနဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာ အသည်းနှလုံးထဲနဲ့ ဦးနှောက်ကနေ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုအတွက် စပါယ်ရှယ်လုပ်သင့်ကြပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ၁၃-၂-၂ဝ၁၁ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ (မြန်မာကလေးများနေ့)၊ နယူးဒေလီ။
U Boke village ညောင်ကန်
(တောသားရွာကိုရေးပြီး တောသူရွာအကြောင်းလေးလည်း ရေးပါရစေ။)
• ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းအိမ်ပြန်၊ ညောင်ကန်ကိုအခေါက်တိုင်းရောက်၊
• ရောက်တိုင်းလည်းစားစရာ၊ ယာခင်းကခူးဆွတ်ချက်၊
• ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ကုလားပဲရွက်၊ စမြိတ်ရွက်၊
• လျှာရင်းမြက်မြက်၊ ငရုပ်သီးခင်းကထွက်တဲ့ ဖယုံသီးအကင်းကတခွက်၊
• ဆောင်းရာသီထွက် မောင်မခေါ်ပဲကြီးနှပ်ချက်၊
• ချက်ကျွေးတဲ့ဒေါ်လေး လွမ်းမိပါသေး၊
• ဘေးအိမ် အမျိုးအိမ် ခေါ်ကျွေး မှတ်မိသေး၊
• အဝေးကနေ အလည်ပြန်ရင် ကျွေးချင်ကြအုံးမှာလည်းမြင်ယောင်မိသေး၊
• ရွာအဝင်ရေကန်ဘေးမှာ အင်တာနက်ကလေးချိတ်ဘို့ရာ သန်းကောင်အထိလည်းစောင့်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော့်ဇနီးဇာတိ ညောင်ကန်ဟာ ဘုတလင်မြို့ အနောက်ဖက် ၄ မိုင်အကွာက ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ဟာ ဘကြီးတော်နဲ့ နန်းမတော် မယ်နုတို့လက်ထက်မှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊ နန်းမတော်မယ်နု ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းတဲ့ အင်းဝက အုတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာ သီတင်းသုံးခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပရိယတ္တိသမိုင်းမှာ ဗုဓ်အစ၊ ဗုဓ်အလယ်၊ ဗုဓ်အဆုံးဆိုပြီး ဥဒါန်းစကားတွင်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာနဲ့ သမာဓိအရာမှာ လက်ဖျားခါရပေမဲ့ နှုတ်အင်မတန်နည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဆရာတော်ကို စကားပြောလာအောင်ကြံဆောင်တဲ့ အမတ်ကြီး ဦပေါ်ဦးက လက်မြှောက်ခဲ့တဲ့ သာဓကတခုရှိခဲ့တယ်။
• ကြည့်နေ ကျုပ်နဲ့တွေ့ရင် ဆရာတော် ဦးဗုဓ် ရွန်းရွန်းဝေအောင် စကားပြန်ပြောမှာလို့ဆိုပြီး ဦးဗုဓ်ကျောင်းကိုသွားပါသတဲ့။ ပြောစရာမရှိ ပြောစရာစကားက်ိုရှာတော့ ရေကန်ကြီးကိုမြင်တာနဲ့ ဟောဒီရေကန်ကြီးဟာ အတော်လေးကောင်းလှပါလား ဘုရား။
• အေး ကောင်းတယ်။
• ရေကလည်း သိပ်ကိုကြည်နေတာပါပဲလားဘုရား။
• အေး ကြည်တယ်။
• ဒီရေကန်ကြီး ဘယ်လောက်များ နက်ပါသလဲဘုရား။
• ဆရာတော် သီတင်းသုံးတော်မူတဲ့ ကျောင်းတိုက်အတွင်းဖြစ်လို့ နီးတဲ့အတွက် သိလိမ့်မယ်အထင်နဲ့ လျှောက်ထားမိတာပါ ဘုရား။
• ဒီမှာ ဒကာ၊ နီးတိုင်းသာသိရမယ်ဆိုရင် ဒကာရဲ့နှုတ်ခမ်းမှာပေါက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေး အပင်ဘယ်နှစ်ပင်ရှိမလဲ။
Impunity နောက်ကြောင်းပြန်နဲ့ ပီအာ
မနေ့က အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုးက ဆွေးနွေးပါတယ်။ ၄၃၆ ပြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမှုကို စိုးရိမ်သူတွေ စိုးရိမ်မှုမရှိရလေအောင် ပီအာနစ်နဲ့ အစားထိုးသင့်တယ်တဲ့။
• ကျွန်တော် ၅-၁-၂ဝ၁၅ နေ့က Focus မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ထဲမှာ ရေးခဲ့ဘူးတယ်။ အောက်တိုဘာမတိုင်ခင် ဖြစ်လာနိုင်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပီအာကို နေရာတကာမှာလုပ်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူးလို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
• ၂၇-၁-၂ဝ၁၅ နေ့ကလည်း Concise History ခေတ်သမိုင်း သံခိပ်ထဲမှာ ငါလုပ်ထားတာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန် တရားစွဲမရဘူးဆိုတာ ထည့်ထားလို့ရေးခဲ့တယ်။
• (စစ်အစိုးရကျူးလွန်ခဲ့သမျှ ရာဇဝတ်မှုတွေအားလုံးကို) နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခြင်းမရှိစေရဆိုတဲ့ ချွင်းချက်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။
• ဒါဖြင့်ရင် အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ကျူးလွန်တာတွေကိုပါ နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမခံချင်တာလား။
Billboard politics ဆိုင်းဘုတ်နိုင်ငံရေး (သို့) ကင်ဆာဆိုင်းဘုတ်
သတင်း = ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျေးရွာစာရင်းကောက်ယူရေး မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှာ မေတ္တာကင့်ပိန်းက ဆောင်ရွက်နေ
• ပြည်ခိုင်ဖြိုးမြို့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျေးရွာ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးစံပြကျေးရွာလို့ဆိုင်းဘုတ်တပ်တာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ မငြိစွန်းဘူးလို့တော့ ဥပဒေသမားတွေကပြောတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဲလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။
• NLD ကနေ အဲလိုလုပ်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သေချာပေါက်ပြောလာမှာပဲ။
• ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ပါတီနေရာကို အဲဒီပါတီနာမည်တပ်လို့ရမလား။ ပုလဲမြို့နယ်မှာ ၂ဝ၁ဝ တုံးက NLD ကဝင်မပြိုင်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်တယ်။ ၂ဝ၁၂ မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကြတာ NLD က နိုင်တယ်။ နိုင်တဲ့ရွာတွေမှာ NLD ကျေးရွာတွေလို့ ဆိုင်းဘုတ် စိုက်လို့ရမလား။ ရတယ်ဆိုင်ရင်တောင် မလုပ်ချင်ပါ။
• စစ်အစိုးရတွေလက်ထက်မှာ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးတွေ ကြိုက်သလိုရေးပြီး နေရာတကာမှာစိုက်ထူခဲ့တယ်။ အခု အစိုးရက အတူတူပဲလား။ ပိုဆိုးနေသလား။ မြို့သိမ်း-ရွာသိမ်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်။
• ပါတီဆိုင်းဘုတ်တပ်ဘို့ လိုအပ်ချက်ဆိုတာတွေ ဥပဒေမရှိရင်တောင်မှ လမ်းညွှန်ချက်၊ မူဘောင်တော့ရှိရမယ်။ အဲတာတွေက ဘာတွေလဲ။ ဘယ်သူတွေကလုပ်ထားတာလဲ။
• လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ဥပဒေ မလုပ်သင့်ဘူးထား။ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့လုပ်စားတဲ့ခေတ်ကုန်သင့်ပြီ။
• ကျန်းမာရေအတွက် ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဥပဒေနဲ့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးကင်ဆာဆိုင်းဘုတ်တွေ မရှိသင့်တော့ပါ။
Photo: Hot Dogs cause Butt Cancer ပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေနဲ့လုပ်တဲ့ ဟော့ဒေါ့စားရင် အူမကြီးကင်ဆာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
China scorns NY Times on Myanmar
တရုပ်က မြန်မာသတင်းရေးတဲ့ နယူးယော့တိုင်းမ် သတင်းစာကို ပြစ်တင်လိုက်
• ၂၇-၁-၂ဝ၁၅ နေ့ ဆင်ဟွာသတင်းကရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး Hua Chunying ဟွာ ချန်ယင်းကနေ နယူးယော့တိုင်းမ် သတင်းစာ The plunder of Myanmar မြန်မာကိုခိုးတဲ့သူ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကိုအဲလိုတုန့်ပြန်လိုက်တာပါ။ အချက်အလက်တွေကို တလွဲဖြစ်အောင် ရေးတာလို့ ချေပပါတယ်။
• နယူးယော့တိုင်းမ်အဆိုအရ တရုပ်ဟာ မြန်မာ့သဘာဝရင်းမြစ်တွေကို အလုံးအရင်းနဲ့ လုယက်ယူငင်နေတယ်လို့ ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
• တရုပ်ရဲ့လောဘဟာ ကျားကနေ ကြေးနီအထိရှိတာမို့ သဘာဝဝန်းကျင်နဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကို အန္တရာယ် ပေးနေတယ်။ မြန်မာလူထုက အဲလိုလုယူနေတာကိုရပ်စချေင်နေကြတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။
• ကျမတို့က သေအချာသဘောမတူပါ။ ဒီလိုရေးတာဟာ တရုပ်နဲ့ မြန်မာအကြား သဘောထား ကွဲလွဲအောင် လုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဟွာကဆက်ပြောပါတယ်။ တရုပ်က အမြဲပဲတရားမဝင်သစ်ခုတ်တာ၊ တရားမဝင် သတ္ထုတူးဖေါ်တာ၊ တရားမဝင် တောရိုင်းသဘာဝရောင်းဝယ်တာတွေကို ဆန့်ကျင်တယ်။
• ကျမတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပ်အဝင် အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်ရေးနဲ့ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးတွေအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဘို့ရာ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တရုပ်လူမျိုးတွေကို ဒေသခံတရားဥပဒေတွေကို လိုက်နာကြဘို့၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဘို့နဲ့ ဒေသခံတွေ အကျိုးအမြတ်ရစေဘို့ ပြောထားပါတယ်။
Infamous Postage Stamps မကောင်းသတင်းနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းများ
သတင်း = တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပို့ပေးခဲ့လို့တဲ့ ဗခမက (ငြိမ်း) ပုံနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း ထုတ်မယ်တဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်သတင်းဆိုတော့ မှန်-မမှန်မသိပါ။
၁။ Elvis Puggy Portrait by Nancy Medina Postage Stamps $28.15
အဲလ်ဗစ် ပက်ဂီ ပုံတူ (ခွေးဘီလူး) တံဆိပ်ခေါင်း
၂။ Dirty Water Dog NYC Postage $25.15
ညစ်ညမ်းတဲ့ ဝါးတာဒေါ့စားစရာ တံဆိပ်ခေါင်း
၃။ Neapolitan Bananas Stamps $24.15
နပိုလီယန် ငှက်ပျောသီး တံဆိပ်ခေါင်း
၄။ Inverted Jenny U.S. Airmail stamp 24¢
မှောက်နေတဲ့သင်္ဘော ယူအက်စ် တံဆိပ်ခေါင်း
Concise History ခေတ်သမိုင်း သံခိပ်
• ရှေ့နေချုပ်လာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံရေးစမ်း။ သုံးချက်ပဲကွာ။
• ငါလုပ်ထားတာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်တရားစွဲမရဘူးဆိုတာ ထည့်ထား။
• ဒေါ်စုကို သမတလုပ်မရအောင် ကန့်ထား။
• အခုရေးတာကို ပြင်မရအောင် လုပ်လိုက်။
• အဲတာတွေကို ညောင်နှစ်ပင် ပို့လိုက်။
• မုန်တိုင်းကြီးလာမယ်တဲ့။ ငါ့အိမ်မပါရင်ထားလိုက်။ လုပ်စရာတွေရှိတယ်။
• နာဂစ်မှာ လူတွေအတော်သေနေပြီ။ နိုင်ငံတကာက ကူညီချင်နေပါတယ်။
• ဘယ်သူ့မှလက်မခံနဲ့။ အမေရိကန်ကိုရော။ အနားမကပ်စေနဲ့။
• တရုပ်မုန်တိုင်းမှာ သမတကိုယ်တိုင်သွားကူတယ်။ အမေရိကန်ကူတာလည်း လက်ခံတယ်။
• အမေရိကန်လည်း နည်းနည်းကူပါစေ။
• အိန္ဒိယကလည်းကူချင်သတဲ့။ ယူနီဖေါင်းဝတ်ဆရာဝန်သာလာပါစေ။
• ငါ ဧရာဝတီသွားမယ်။ လူတွေကို ငါ့ကိုရှိခိုးခိုင်း။
• ဆန္ဒခံယူပွဲသာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်။
• ၁ဝ-၅-၂ဝဝ၈ နေ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ။
• မဲပေးသူပေါင်း = ၂၄,၇၆၄,၁၂၄
• ထောက်ခံမဲပေးသူ = ၉၃့၈၂%။
• မင်းက သမတလုပ်။ မင်းတို့က လွှတ်တော်ကိုအုပ်။ မင်းကပါတီမှာနေ။ မင်းကော်မရှင်။
• မင်းကို တပ်ချုပ်ထားမယ်။ ဟာ မင့်ကို မကြိုက်တော့ဘူး ဂျောင်း။ ဟိုနောက်တယောက်လုပ်၊ ဟုတ်လား။
• လိုအပ်ရင် ၅ နှစ်ပြန်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ထုတ်ထား။
• အေး ငါနားအုံးမယ်။
• မဲဆန္ဒရှင် = 22,496,660
• ထောက်ခံမဲပေးသူ = 20,786,596
• ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ = 22,708,434
• ထောက်ခံသည့် ရာခိုင်နှုန်း = 92.48 ရာနှုန်းလို့တွေ့မိတယ်ဆရာ။
ကျွန်တော်လည်း တနေရာမှာတွေ့လို့ သိမ်းထားတာ။ အခုဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Flag robbery အလံတော်အမှု ဘယ်ကတုံးကစသလဲ
ASM: ကျောင်းသားတွေ အလံဖြုတ်ချတာ မှားတယ်။ ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ပေးရမယ်။ အလားတူပဲ နိုင်ငံတော်အလံမှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ သမတကြီးနဲ့ ဦးတေဇတို့ပါ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုနဲ့ အရေးယူပေးပါ။
DTS: တို့အလံကို ကော်ပီ-အင်-ပေ့စ် လုပ်တာကြတော့ကော။ ဟက် လုပ်တာလား၊
ASM: အဲဒါ အလံ့့ တာ ဆရာရေ။
DTS: ဘုန်းကြီးတပါး တရားဟောသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ အဲလိုမပြောတာ။
ဓါတ်ပုံ = ၇-၁ဝ-၂ဝဝဝ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒဗ္ဗလင်မြို့တွင် ကျင်းပသော MPU ညီလာခံမှ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသည့် NCGUB - ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် ဝန်ကြီးများအဖြစ် ခွန်မားကိုဘန်း၊ ဦးသိန်းဦး၊ ဦးဘိုလှတင့်၊ ဦးမောင်မောင်အေး၊ ဦးမြဝင်း၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၊ ဒေါက်တာစန်းအောင်၊ ဦးသာနိုးတို့ ညီလာခံ သဘာပတိ MPU ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်တယ်ဒီဘူးရီ ရှေ့မှောက်တွင် NCGUB အလံတော်ကိုင်လျှက် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေစဉ်။
My assignment in Myotha မြို့သာ
ကျွန်တော် မြို့သာမှာ တိုက်နယ်ဆရာဝန်အဖြစ် ၆ နှစ်တာ (၁၉၇၆-၈၂) တာဝန် ထမ်းဆောင်ရစဉ်မှာ ဆေးရုံ အဆောက်အဦသစ် ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဆေးရုံကော်မတီလူကြီးတွေနဲ့အတူ ထွန်စက်ပေါ်မှာ ခေါင်းမြီးခြုံနဲ့ ဆီးဖြူသီး လှိမ့်သလိုစီးရပြီး၊ တရွာဝင်တရွာထွက် အလှူခံထွက်ရတယ်။ မြို့သာ-ငါန်းဇွန်-ရွာသစ်ကြီး-မုံရွာအထိ ၃-၄ ခေါက်လာပြီး၊ မုံရွာ သလ္လာဝတီသစ်စက်က သစ်မာတွေ ဝယ်ခဲ့ရတယ်။ (မဆလ) ခေတ်မှာ ဘာပစ္စည်းမဆိုအလွန်ရှားတာ။ သူငယ်ချင်းရှိလို့ တော်သေးတယ်။
အခက်အခဲတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဆေးရုံဖွင့်ပွဲရောက်မှ ပါတီ-ကောင်စီကလူကြီးတွေ ဦးစီးတာကို ကျွန်တော်က သဘောမကျခဲ့ဘူး။ ဖွင့်ပွဲမှာသာလာကြတာလို့မြင်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ငယ်သေးတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆေးရုံဆောက်ပြီးကာလေးမှာ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် ဆေးရုံသွပ်မိုးတွေလှန်ကုန်တယ်။ ခေါင်မိုးတစိတ်တပိုင်း
ပျက်တယ်။ အပျက်အစီးထဲမှာပဲ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး မျက်စိခွဲစိတ်ပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့သေးတယ်။
အခုပဲ လက်ရှိမြို့သာဆေးရုံဆရာဝန် ဒေါက်တာငြိမ်းငြိမ်းအိကနေ ကျွန်တော့်သမီးဆီကို ဓါတ်ပုံတွေပို့ပေးလို့ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံထဲကလူကြီးတချို့ မရှိကြတော့ပါ။ တချို့လည်း ကျန်းမာရေး အတော်ခြူခြာနေကြပြီ။ မြို့သာကို အလွန်သတိရတယ်။ တနယ်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ကျွန်တော်၊ ဦးချစ်မောင်၊ ဦးလှသောင်း၊ ဦးဆင်၊ ဦးဘလှိုင်။ ကျွန်တော့် ဂျစ်ကား ဂ/၂ဝ၆၅
Taj Mahal တာ့ခ်ျမဟာ ဆိုတာ ပါရှားနဲ့ အာရတ်မင်းဆက်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ရှေးဟောင်းဗိသုကာလက်ရာ တခုဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ယူပီပြည်နယ်ထဲက Agra အာဂရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ Mughal မူဂေါလ် အင်ပါယာသခင် ဘုရင်ကြီး Shah Jahan ရှားဂျဟန်ကနေ သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်သူ မိဖုရား Mumtaz Mahal မွန်မ်တာ့ဇ် မဟာ အတွက် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The jewel of Muslim art မွတ်ဆလင် အနုပညာရဲ့ရတနာလို့ တင်စားကြပါတယ်။ UNESCO ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Islamic အစ္စလမ်၊ Persian ပါရှန်၊ Ottoman Turkish တူရကီ အော်တိုမန် နဲ့ အိန္ဒိယဗိသုကာလက်ရာတွေ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ၁၆၃၂ ခုနှစ်မှာစတည်ပြီး ၁၆၅၃ မှာ ပြီးစီးခဲ့တယ်။
• ချစ်မေတ္တာလို့လည်း သရုပ်ဖေါ်တယ်။
• အသည်းကွဲတာလို့လည်း တင်စားကြတယ်။
• အနုပညာဗိသုကာလက်ရာလို့လည်း ချီးမွမ်းကြတယ်။
• တန်ခိုးအာဏာရဲ့သက်သေလို့လည်း ထောက်ပြကြတယ်။
• သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ရဲ့ပြရုပ်လို့လည်း ကဲ့ရဲ့ကြတယ်။
• ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား စီးပွါးရေးလည်းဖြစ်တယ်။
မှတ်ချက်။ နောက်အစိုးရတွေက ထုံးသုတ်တာ၊ ရွှေချတာမလုပ်ပါ။
Facebook became inaccessible across much of the globe foratime on Tuesday
ဆိုရှယ်ကွန်ယက်တခုဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ အင်္ဂါနေ့က တကမ္ဘာလုံးမှာ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကိုဝင်ဖို့ ခဏတာ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ မိနစ် ၄ဝ လောက်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုပုံမှန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဓါတ်ပုံမျှဝေခြင်း Instagram app အက်ပ် လုပ်မရခဲ့ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ဟက်လုပ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ချိန်းတွေခြင်း အက်ပ် Dating app Tinder လဲပြတ်တောက်တာထဲမှာပါတယ်။
ဟက်ကာအုပ်စု Lizard Squad ကတော့ တွစ်တာကနေ သူတို့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအုပ်စုကို Sony's PlayStation Network နဲ့ Microsoft's Xbox Live gaming ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ အပြစ်တင်ခံရဘူးပါတယ်။
• ဒိုင်းတွေနဲ့၊ လက်နက်တွေနဲ့၊
• လက်နက်မဲ့တွေကို စောင့်နေသတဲ့။ (စန်းစန်းတင်)
• ဒိုင်းတွေနဲ့ကာသူတွေက ဒိုင်းကနည်းပစ်၊ ဒိုင်းသွားမှဖြင့်။
• ၅၉ (စ) နဲ့ကာသူတွေကို၊ ၄၃၆ နဲ့ပစ်၊ ၂ဝဝ၈ ကြီး ဒိုင်းသွားမှဖြင့်။
Long walking and health ခရီးရှည်လမ်းလျှောက်သူတွေမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ
ဆေးစာတွေထဲမှာတော့ လမ်းလျှောက်ခြင်းအကျိုး အမျိုးမျိုးသာ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်က လူနာတွေအတွက်သာ ဒီစာကို ရေးရပါတယ်။
1. Angle sprain ခြေပွတ်တိုင်လည်ခြင်း၊
2. Blister အပူဖူးပေါက်ခြင်း၊
3. Cramps ကြွက်တက်ခြင်း၊
4. Dehydration ရေ + ဆားဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊
5. Fainting ရုတ်တရက် မူးဝေမေ့လဲခြင်း၊
6. Foreign body ဆူး၊ သံချွန်၊ မှန်ကွဲစူးခြင်း၊
7. Hypoglycemia သကြားဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊
8. Joint pain အဆစ်နာခြင်း၊
9. Muscle Pain ကြွက်ာသားနာခြင်း၊
10. Swelling ခြေထောက်ရောင်ခြင်း၊
ဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ -
• နေပူရင် အပူဒဏ်တွေခံရနိုင်တယ်။ မိုးရွာရင် မိုးကြောင့်ဖြစ်လာမှာတွေ ရှိတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ အအေးဒဏ် ခံရမယ်။ အဝတ်အစားကို ရာသီရာတုနဲ့ သင့်တင့်မျှတတာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ ဖိနပ် အနေတော်တာစီးပါ။
• အနာ-အကိုက်သက်သာဆေးတွေဆာင်ထားပါ။ ဥပမ Paracetamol, Ibuprofen ဆေးပြား။ ဒီဆေးမျိုးကို အစာတခုခုနဲ့သောက်ပါ။ တနေ့မှာ ၂-၃-၄ ကြိမ်အထိသောက်နိုင်တယ်။
• ကြွက်တက်တာမဖြစ်ရအောင် ကယ်လ်စီယမ်ဆေးပြား တနေ့တပြားသောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ကယ်လ်စီယမ် ထိုးဆေးထိုးပါ။
• ORS ဓါတ်ဆားရည်သောက်ပါ။ ရေသောက်မနည်းပါစေနဲ့။
• အစားအသောက်ကို ဆန်းပြားတာတွေ မစားပါနဲ့။ အစာအဝလွန်အောင်မစားပါနဲ့။
• ခြေထောက်ရောင်တာ သက်သာအောင် နားနေချိန်မှာ ခြေထောက်ကိုမြှင့်ထားပေးပါ။
• ခြေထောက်မှာ အပူဖူးပေါက်ရင် ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်ပေးပါ။ ပိုးသန့်ဆေးရည်လိမ်းပါ။ ပိတ်တီးစည်းပေးပါ။ ATT မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါ။ အပူဖူးကို ဖေါက်မပြစ်ပါနဲ့။ ပေါက်သွားရင် ဆေးထည့်ပါ။
• သကြားဓါတ်နည်းရင် သကြားရည်တိုက်ပါ။ သကြားပါသွားရည်စာစားစေပါ။
• ရုတ်တရက်မူးလဲတာဖြစ်ရင် ကြမ်းပေါ် (လမ်းပေါ်) မှာ လှဲချပါ။ လေသန့်ရစေပါ။ အားပေးပါ။ သတိရ-မရ စစ်ဆေးပါ။ သတိမရတာ မကြာပါ။ သတိကောင်းလာရင် ဓါတ်ဆားရေ၊ အချိုရည်တိုက်ပါ။ သက်သာလာရင် လှဲနေရာကနေ ထိုင်၊ ထိုင်ရာကနေ ရပ်၊ နောက်မှ တဆင့်ခြင်း လမ်းလျှောက်စေပါ။
• CPR ခေါ် အသက်ရှူတာ + နှလုံးခုန်တာပြန်လည်ပြုစုနည်း လိုသူကိုလုပ်ပေးပါ။
• ဆီး-ဝမ်းသွားချိန်ပါစေ။ စားချိန်-နားချိန်-အိပ်ချိန် မှန်ပါစေ။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မွေးပါလေ။
အသက်ကြီးသူတွေမှာသာ အဖြစ်များတယ်။ ဒီရောဂါမဖြစ်အောင် အကြာကြီးမရပ်ရသလို၊ အ်ိပ်ရာထဲမှာလဲ ရက်အကြာကြီး လှဲမနေရဘူး။ အိပ်ရာက မထနိုင်သူများ ခြေထောက်တွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတယ်။ ဝလွန်းရင်လဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တောင်ပေါ်အမြင့်မှာ နေရ၊ သွားရရင် သတိထားရတယ်။ လူက ဖက်တီး၊ အသက်ကလည်းကြီးရင် ခရီးမထွက်နဲ့။ ရေ-အရည် အများကြီးသောက်ပါ။ အရည်ထဲမှာ အရက်နဲ့ ကော်ဖီများတာ မပါဘူး။ အဝတ်အစားကို ကြပ်နေတာမျိုး မဝတ်ရဘူး။
လူကောင်းပကတိကနေ ရုတ်တရက်မူးပြီး သတိမေ့တာဟာ Shock ပါဘဲ။ (ရှော့ခ်) တွေက အမျိုးအစားများတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေက လိုသလောက်အလုပ်မလုပ်နိုင်တာကနေဖြစ်တယ်။ လူ့ကိုယ်က အရေးပါတဲ့အင်္ဂါတွေတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အောက်စီဂျင် မလုံလောက်လို့ ဖြစ်လာစေတယ်။ အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လာ၊ မူးလဲမယ်။ ပျို့ချင်-အန်ချင်လာမယ်။ ရေငတ်လာမယ်။ မျက်စိကဝေဝါး၊ သူငယ်အိမ် ကျယ်လာမယ်။ အသက်ရှူတာ တိမ်-မြန်-မမှန်ဖြစ်မယ်၊ အရေပြား အေးလာ၊ ဖြူရော်လာ၊ စိုထိုင်းလာမယ်၊ လက်ကောက်ဝတ် သွေးခုန်တာ မြန်မယ်၊ စမ်းမရဖြစ်မယ်။
• Hypovolemic Shock သွေးထုထည် နည်းလို့ဖြစ်တဲ့ (ရှော့ခ်)၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ အတွင်းထဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကို ဖြစ်ဖြစ် သွေးယိုထွက်တာ၊ မီးလောင်လို့ အရည်တွေ ခမ်းခြောက်တာ၊ အန်လို့-ဝမ်းလျှောလို့ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆားတွေ နည်းတာကြောင့် ဖြစ်တယ်။
• Neurogenic Shock အာရုံကြောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ (ရှော့ခ်)၊ သွေးကြောတွေ ပုံမှန်မဟုတ် ဖေါင်းလာလို့ သွေးတွေ လိုရာမရောက် ဖြစ်လာမယ်။ (အော်တိုနောမစ်) အာရုံကြောစနစ်ကို သက်ရောက်လို့ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖိအား ကျမယ်၊ တခါတလေ နှလုံးခုန် နှေးတတ်တယ်။ ဦးနှောက်ကို သွေးပြန်ရောက်ရင် ပြန်ကောင်းမယ်။ ဦးနှောက် ထိခိုက်တာ၊ ခါးဆစ်ရိုးထဲက အာရုံကြောစနစ် ထိခိုက်တာတွေ ကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။ အတွင်း အင်္ဂါတွေကို ထိခိုက်လာမယ်။
Psychogenic Shock စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ (ရှော့ခ်)၊ ကြောက်စိတ်များ၊ အပျော်လွန်၊ ဒေါသကြီး၊ ပူပန်မှုလွန်ကဲရာကနေ ဖြစ်တယ်။ သွေးကြောတွေ ကျယ်လာတယ်။ ဦးနှောက်ကို သွေးအရောက်နည်းတယ်။ သွေးဖိအားကျမယ်၊ အရေပြား အေးစက်နေမယ်။ ချွေးပြန်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ သတိတဝက်တပျက်မရတာနဲ့ လုံးဝသတိမရတာဖြစ်မယ်။
Anaphylactic Shock (အနာဖလက်တစ်-ရှော့ခ်)၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့ရာကနေဖြစ်တယ်။ ယားယံလာမယ်၊ အနီပိန့်တွေထွက်မယ်၊ အသက်ရှူခက်လာမယ်၊ ဆီးသွားချင်-ဝမ်းသွားချင်ဖြစ်လာမယ်။ ပူလောင်လာသလို ခံစားရမယ်၊ အသံပျောက်မယ်။ ဆေး၊ အဆိပ်၊ အင်းဆက်၊ အမှုံအမွှား၊ အစားအသောက်၊ စတာတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။
Shock ဖြစ်ပြီဆိုရင် ရုတ်တရက် ချက်ချင်းဖြစ်တာမို့ ရှေးဦးသူနာပြု လုပ်ဘို့ အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်ကို ကယ်နိုင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေးရုံတွေဆီ ရောက်မှဆိုရင် နောက်ကျတတ်တယ်။ ပြုစုမဲ့သူက တည်ငြိမ်ရမယ်။ တတ်ထားရမယ်။
အသက်ရှူလမ်းစစ်ရ၊ ပြင်ရမယ်။ ပိတ်ဆို့နေတာ မရှိစေနဲ့။ လည်ပင်းဆန့်၊ မေးကိုပင့်ပါ။ သွေးယိုတဲ့နေရာကို သွေးမထွက်အောင်လုပ်ပါ။ ဖိထားပေးပါ။ မြှင့်ထားပေးပါ။ ပတ္တီး-ကြိုးနဲ့ စည်းထားပေးပါ။ Artery forceps သွေးကြောညှပ် ရှိရင်-လိုရင် သုံးပါ။ ခြေထောက်ပိုင်းကို ခေါင်းအထက်မှာ မြှင့်ထားပါ။ အန်နေရင် ခေါင်းတဖက် စောင်းထားပါ။ ခေါင်း-လည်ပင်း ကျိုးရင်-ကျိုးတယ် ထင်ရင် ပက်လက်အနေအထားမှာသာ ထားပါ။ အရိုးကျိုးရင် အမာတခုခုနဲ့ ကြပ်စည်းပါ။ ဆွဲမဆန့်ပါနဲ့။ သက်တောင့်သက်သာ နေပါစေ။ အေးနေရင် စောင်စတာနဲ့ နွေးအောင် ခြုံပေးပါ။ စို-အေး နေတာတွေ ဖယ်ရှားပါ။ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အနွေးပေးတာမျိုး မသုံးပါနဲ့။ လူနာကို စိတ်ငြိမ်အောင် အားပေးနှစ်သိမ့်ပါ။ သူ့အနာဒဏ်ရာကို မမြင်စေပါနဲ့။ အန်နေလျှင်၊ အဆိပ်စတာ မသေခြာလျှင် ပါးစပ်က ဘာမှမတိုက်ပါနဲ့။ အာခေါင်ခြောက်-ရေဆာရင် နှုတ်ခမ်းကိုသာ ရေဆွတ်ပေးပါ။ ဆေးပညာတတ်ကျွမ်းသူ အကူအညီခေါ်ပါ။
If the hill will not come to Mahomet, Mahomet will go to the hill (Francis Bacon)
တောင်ကုန်းက မိုဟာမက်ဆီကိုမလာရင်တော့ တောင်ကုန်းဆီကို မိုဟာမက်သွားရမယ်။
Burma is Facebook ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့တူတဲ့တိုင်းပြည်
• ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တယောက်ကနေ နောက်တယောက်ကို ဘလော့ခ်လုပ်ကြရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်းပါတယ်။
• မှတ်မှတ်ရရ ၄၃၆ တုံးကတခါ။ နောက်ဂဏန်းသုံးလုံးဟာလည်း အခန့်တခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
• အခုထပ်တိုးကတော့ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာ။
• FB will be gradually polarized ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ ကြာလေကြာလေ တဖက်သပ်ဖြစ်လာလေတဲ့။ တူသူတွေသာ စုနေကြတော့တယ်။
• The owner and those blocked become poles apart ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်နဲ့ ဘလော့ခ်လုပ်လိုက်သူတွေဟာ ကြာတော့ ဝန်ရိုးစွန်းတွေလို ဝေးကွာသွားကြတယ်တဲ့။
• အဲလိုဖြစ်တာ ကောင်းလည်းကောင်း၊ မကောင်းလည်းမကောင်းပါ။ မရင့်ကျက်သေးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မတူတာတွေတွဲနေဘို့ အလွန်မတန်ခက်ခဲတယ်။
• ဗမာပြည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ဟာ ဒီနေရာမှာ အတူတူဖြစ်နေတော့တယ်။
One-man show တယောက်အားနဲ့တားသော်ရ၏
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို သည်အတိုင်းသာကျင်းပမယ်ဆိုရင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလဲ တပြားသားမှမလျှော့၊ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာလဲ တပဲသားထက်မပိုသေး၊ ဒီတော့ အာဏာဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားနေခြင်းကို တရွေးသားထက်ပေါ့မဲ့ပုံမရှိပါ။
ကြိုတင်မဲတွေ၊ ဖယောင်းသုတ်ချင်တာတွေ မလုပ်တော့ဘူးလို့ အာမခံမှာပါပဲ။ တရားမျှတပါမယ်လို့ အရင်ကလိုပဲ ထပ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက ထူးပြီးကောင်းလာတာမရှိ၊ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌလည်း အပြောင်းအလဲမရှိပါ။ ဒီလိုထိပ်ဆုံးကနေရာတွေမှာ အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့သဘောဟာ အစုံလိုက် တဆင်စာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေတယ်။ လာမဲ့ကာလအတွက် နောက်တဆင်စာအစုံကိုလဲ ပန်းတိမ်အပ်ထားပြီးပုံရတယ်။
အမတ်နေရာ ၇၅% ကိုသာ မဲပေးကြရမဲ့သူတွေအတွက် မျော်လင့်ချက်တွေနည်းစေပါတယ်။ ဒို့ရွေးနိုင်တာက သမတလဲမဟုတ်၊ ဝန်ကြီးတွေလဲမဟုတ်၊ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ထဲက တရားသူကြီးတွေလဲမဟုတ်၊ ဒါကြောင့် ဥပဒေပြုရေးလုပ်ခွင့်ရကြမဲ့ အမတ်တွေကိုတော့ တို့ကြိုက်တာပေးကြမယ်လို့ အားသွန်ခွန်စိုက်ရှိလာနိုင်လို့ ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နင်လားငါလား အဖြေရစရာအကြောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
လူထုကမရွေးသူတွေအရေအတွက် အပြောင်းအလဲမရှိသေးလို့ လွှတ်တော်အသံက လူထုကိုရောင်ပြန်မဟပ်သေးတာက ဆက်ပြီးမဟပ်ပဲရှိနေပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်ကိုကြည့်ရင် အသံသာရှိအဆံဆိုတာ ကျည်ဆံသာဖြစ်ပါတယ်။
သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံကနေ သမတလုပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတဲ့အခါ ဆက်လုပ်ချင်သေးတဲ့သမတက အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကို မရရအောင်ပြင်ကြတယ်။ ၁၉၉၅ တုံးက အာဂျင်တီးနာမှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ရုရှားသမတ ဗလာဒီမာ ပူတင် ကတော့ တကိုယ်တော်သမား။ သူ့အတွက်ပဲသူကြည့်တဲလူ။ မြန်မာပြည်မှက အုပ်စုလိုက်။ သူ့အုပ်စုအတွက်သူ ကြည့်ကြတယ်။ နောက်လူတက်မလာအောင် ပြင်မဖြစ်အောင်ပိတ်ထားကြတယ်။
သမ္မတက ဖွဲ့စည်းပုံကို လွှတ်တော်ကသာပြင်နိုင်လို့ သမ္မတရော ကာချုပ်တို့မှာပါ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ သမတက စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပြောနေတာပါ။ စာအုပ်ကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက် မရိုးသားတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ်။ ကာချုပ်ဟာ ၂၅% ကိုကိုင်ထားသူဖြစ်လို့ ကာချုပ်မှာ ၄ ပုံ ၁ ပုံတာဝန်ရှိတယ်။ အမှန်က ၂၅% သာမကပါ။ ဗီတိုအာဏာကို ထုတ်သုံးလိုက်ပါပြီ။
နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမရတာမျိုးကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြရှင်းရတတ်လို့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ ဆက်နေသင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ကနေ့ကမ္ဘာမှာ သူများနိုင်ငံတွေဆီ တခုပြီးတခု စစ်သွားတိုက်နေတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံမှာ စစ်တပ်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအရကို သူ့နေရာမှန်မှာသာရှိပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက နိုင်ငံရေးပြဿနာမှန်သမျှကို စစ်ရေးနည်း၊ စစ်ရေးအမြင်နဲ့သာ ဖြေရှင်းနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅၂ နှစ်ရှိနေပြီ။ ဘယ်ဟာတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါသလဲ။ ပြည်တွင်းစစ်လဲ မရှင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်လာပါသလား။ စစ်တပ်ပါတာ နည်းနည်းလျှော့တော့ နည်းနည်းကောင်းလာသလိုရှိလာတာ မဟုတ်လား။
ကနေ့အခင်းအကျင်းတွေဟာ စစ်အစိုးရကနေ အကွက်ချထားတဲ့ ပုံစံသာဖြစ်တယ်။ လူတွေက ဒေါ်စု သမ္မတဖြစ်ရဘို့ ပြင်ချင်နေကြတာမဟုတ်ပါ။ အဲလိုဖြစ်ချင်သူတွေလဲ အများကြီးရှိတာတော့ မငြင်းပါ။ နိုင်ငံရေးအသိ ရှိသူတွေကတော့ အဲလိုအကွက်ချစီစဉ်ထားမှုကို ဖျက်ချင်ပြင်ချင်ကြာတာဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာ လူထုကနေ အကွက်ချရတာဖြစ်ရပါတယ်။
သမ္မတကပဲပြောပါတယ်။ လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူလူထုက အရေးအကြီးဆုံးပဲတဲ့ဗျာ။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပါလို့ လက်မှတ်ပေါင်း ၅ သန်းကျော် ထိုးထားတယ်။ ငါးသန်းအားနဲ့ယူသော်မရ ဆိုရိုးစကားသစ်ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာ။ တယောက်အားနဲ့ တားသော်ရ၏လို့ပါ ဆက်ပြောရတော့မယ်။ ဘယ်တယောက်လဲ။ ကာချုပ်က မဟုတ်ပါဘူးငြင်းရင်တော့ ကာချုပ်အထက်ကလူ ဖြစ်မယ်ပေါ့။ သေချာတာတော့အုပ်စုတခု။ စစ်တပ်မဟုတ်ရင် စစ်ထွက်အုပ်စု။
One-man show ဆိုတာ တကိုယ်တော် Solo ဖျော်ဖြေတာပါ။ Comedian လူရွှင်တော်က အသုံးတော်ခံတာမျိုး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာတော့ Villain လူကြမ်းကဇာတ်လိုက်။
Unknown Soldiers အညတရ နိုင်ငံကြီးသားများအလိုရှိသည်
• ပြောဘို့အကွက်သာလိုက်ရှာနေသူတွေတော့ ပြောကြတယ်။ NLD မပါဘူး၊ ဟိုအဖွဲ့ငြိမ်နေတယ်။ သည်အဖွဲ့က နေရာဝင်ယူတယ်။
• အရွယ်နဲ့ တာဝန်မတူရင် ကိုယ့်နေရာအမှန်ကို ရွေးတတ်ရတယ်။
• ကျောင်းသားတွေပွဲမှာ လူကြီးတွေက ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဘို့ မသင့်တတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်မရှိဘူးမဟုတ်ပါ။
• လူကြီးတွေက ကိုယ်နဲ့အသင့်ဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းနာကို ရွေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• အပြော၊ အဟော၊ အရေးနဲ့ အဝေးကနေကူညီနိုင်ကြတယ်။
• အကူအညီတွေ လှမ်းပို့ပေးနိုင်တယ်။ မေတ္တာပို့နိုင်ကြပါတယ်။
• ကျောင်းသားတွေကို ဖြိုခွဲမဲ့လူကြီးဆိုသူတွေကို စည်းရုံး၊ ဖျောင်ဖျ၊ နားချတာမျိုး လုပ်နိုင်ရင်လုပ်ပါ။
• လူသိခံစရာ လိုချင်မှလိုမယ်။ အမည်မဖေါ်စေတနာရှင်တွေ၊ သတင်းမှာမပါတဲ့ အကျိုးဆောင်သူတွေဟာ အညတရစစ်သည်တွေလိုပဲ အလေးပြု၊ သာဓုခေါ်ခံထိုက်ကြတယ်။
Photo: The Tomb of the Unknown Soldier at the Arc de Triomphe in Paris, France
Sperm count သုက်ပိုးနည်းစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ Infected semen စိုစွပ်စေတဲ့အရည် ပိုးဝင်ခြင်း၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တင်းကြပ်ခြင်း၊ အထိုင်များခြင်း၊ ပူလွန်းသည့်ရေချိုးခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ သုက်ရည်ထွက်သည့်အကြိမ် များလွန်းခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်များခြင်း၊ စိတ်-ကိုယ် ပင်ပန်းလွန်းခြင်း၊ Zinc deficiency သွပ်ဓါတ်နည်းခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးရာပါ လိင်ပိုင်းအင်္ဂါ ချို့ယွင်းခြင်း၊ ကျားဟော်မုန်းသုံးခြင်း။ Varicocele ရောဂါ ရှိရင် ခွဲစိတ်ကုသပါ။
သုက်ပိုးများစေနည်း (၁ဝ) နည်း
1. လိင်ဆက်ဆံတာ နဲ့ (မာစတာဘေးရှင်း) အကြိမ် မများလွန်းစေရ၊
2. ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ပါ၊
3. ပုံမှန်ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ၊
4. အဆီနည်းတဲ့ အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် အစားအစာများ စားပါ၊
5. ကျားအင်္ဂါနေရာ အပူမများစေရ၊ အတွင်းခံ မတင်းကြပ်စေရ၊ ခြည်ထည်ကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ၊
6. ကိုယ်အလေးချိန် များနေရင် လျှော့ချပါ၊
7. ကိုယ်-စိတ် ပင်ပန်းမှုတွေ ပြုပြင်ပါ၊
8. ရိုးရာ-အဆီနဲ့ အနှိပ်ခံပါ၊
9. ဗီတာမင်၊ ဓါတ်ဆားတွေ သုံးစွဲပါ၊
10. ဆက်ဆံတဲ့အချိန်ဟာ နံနက် နဲ့ နေ့ပိုင်း ပိုဖြစ်သင့်တယ်။
အမျိုးသမီးတိုင်း အရွယ်ရောက်ချိန်ကနေ သွေးဆုံးချိန်အထိ လစဉ် ရာသီလာတယ်။ သားအိမ် အတွင်းဆုံးအလွှာက ပါးရာကနေ ထူထူလာတယ်။ ကိုယ်ဝန် မဆောင်ရင် လအကုန်မှာ အထူဆုံး အဆင့်ကနေ ပျက်စီးပြီး ရာသီသွေးအဖြစ် ဆင်းလာတယ်။ လအလည်ရက်တိတိမှာ မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥ ထွက်တယ်။ တကယ်လို့ ကျားသုက်ပိုး ဝင်လာချိန်ဖြစ်ရင် သူတို့နှစ်ခု တခုကနေ တခုဆီကူးပြီး၊ ပူးပေါင်းတယ်။ မွေးလမ်းက ဝင်လာတဲ့ ကျားသုက်ပိုးက သားအိမ်အဝကနေ သားအိမ်ထဲ၊ ဆက်ပြီး သားအိမ်ပြွန်ထဲ ကူးသန်း ဝင်ရောက်လာတယ်။ မမျိုးဥကလည်း မျိုးဥအိမ်ကထွက် သားအိမ်ပြွန်ထဲ ဝင်လာ၊ ပြွန်တနေရာမှာ သွားဆုံကြတယ်။ ဆုံရာကနေ ပေါင်းစပ်ပြီး၊ နှစ်ကိုယ့်တစိတ်ဖြစ်၊ သားအိမ်ထဲ ပြန်ဆင်းလာ၊ အကောင်းဆုံး တနေရာမှာ မြှုတ်ပြီး၊ ခိုအောင်းလိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပြီ။ တချို့မှာ ရာသီသာ ဆင်းပေမဲ့ မျိုးဥထွက်ချင်မှ ထွက်တယ်။ မျိုးဥက သားအိမ်ထဲ ရောက်တာ၊ မရောက်တာနဲ့ ရာသီနဲ့ မဆိုင်ပါ။ ကျားသုက်ပိုးသာ ဝင်မလာရင် မမျိုးဥက မျိုးဥအိမ်ထဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနီးအနားဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုက်ခေါင်းထဲဖြစ်ဖြစ်၊ တနေရာရာမှာ သက်တမ်းကုန်ရင် ပျက်စီးသွားတယ်။
ပုံမှန် ယောက်ျား-သုက်ရည်ဟာ အဖြူနဲ့ မီးခိုးရောင်စပ်ကြားမှာ ရှိတယ်။ တခါတလေ နဲနဲဝါတယ်။ ပန်းရောင်ရှိတယ်။ အနီရောင် ဖြစ်နေရင် သွေးပါနေလို့ပါ။ ကျားအင်္ဂါကနေ ထွက်တာနဲ့ သုက်ရည်က ခဲလာတော့ ပြစ်ချွဲလာတယ်။ ၅ မိနစ် ကနေ နာရီဝက်မှာ ပြန်ပြီး အရည်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရင် ကလေးရနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေတယ်။ ပျမ်းမျှဆိုရင် တခါသုက် ထွက်တာက ၂-၅ စီစီ (မီလီ-လီတာ) ရှိတယ်။ သုက်မလွှတ်တာ ကြာရင် များပြီး၊ ခဏခဏ ထွက်ရရင် နည်းမယ်။ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေအဖွဲ့ WHO သတ်မှတ်ချက်ကတော့ -
• သုက်ရည် တခါထုတ်တာဟာ အနည်းဆုံး ၂ စီစီ ထုထည်ရှိရတယ်၊
• ၁ စီစီ သုက်ရည်ထဲမှာ Spermatozoa သုက်ပိုးကောင်ရေ သန်း ၂ဝ ပါရတယ်၊
• တခါထုတ်တာမှာ အနည်းဆုံး သုက်ပိုး သန်း ၄ဝ ရှိရမယ်၊
• သုက်ပိုး ၇၅% ရှင်နေတာ ပုံမှန်ဖြစ်ရတယ်၊
• သုက်ပိုး အနည်းဆုံး ၃ဝ% က ပုံမှန် Morphology ပုံသဏ္ဌာန်ရှိနေတာ ပုံမှန်ဖြစ်ရတယ်၊
• သုက်ပိုး အနည်းဆုံး ၂၅% က Motility အလျင်အမြန် ကူးသန်းသွားလာနေတာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။
• သုက်ပိုး အနည်းဆုံး ၅ဝ% က ရှေ့ဖက်ဆီကို နှေးချင်နှေးပါစေ ကူးသန်းသွားလာနေတာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။
Semen analysis သုက်ပိုး အရေအတွက်နဲ့ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်တာဟာ ကလေး ရနိုင်စွမ်းအတွက် လုပ်တာပါ။ ဒါ ကောင်းနေယုံနဲ့တော့လဲ အသေအခြာ ကလေးရမှာဘဲလို့ မပြောနိုင်သေးပါ။ အထက်က ရေးထားတာတွေအပြင် White blood cells သွေးဖြူဥ၊ Fructose သကြားဓါတ်၊ pH အက်စစ်ဓါတ်၊ Liquefaction time အရည်ပျော်ချိန်တွေကိုပါ စစ်ဆေးတယ်။ တခါထဲနဲ့ မမှန်နိုင်ဘူး။ ၂ ခါ ၃ ခါ၊ ၂ ပါတ်၊ ၃ ပါတ် ခြားပြီး ထပ်စမ်းရတယ်။
သုက်ရည်ရဲ့ အရည်အသွေးကို သက်ရောက်စေတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။
• တကယ် လိင်ဆက်ဆံလို့ ထွက်တဲ့သုက်က မာစတာဘေးရှင်း လုပ်လို့ ထွက်တာထက် သုက်ပိုးအရေအတွက် ၁၅% ပိုများတယ်။ လှုတ်ရှားမှု နဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ပါ နဲနဲပိုတယ်။ ထုထည်က ၂၅-၄၅% ပိုတယ်။
• သုက်ရည်ဟာ အပူချိန် သိပ်မခံနိုင်ဘူး။ ပူရင်၊ နွေရောက်ရင် နဲတယ်။
• Depo-Provera, Adjudin, Gossypol ဆေးတွေက ယောက်ျားတွေကို မြုံစေတယ်။
• (SSRI) စိတ်ကျဆေးတွေနဲ့ Marijuana ဆေးခြောက်ကလဲ မကောင်းစေဘူး။
• Penicillin and Tetracycline ပိုးသေဆေးတွေကလဲ နည်းစေတယ်။
• Anabolic steroids Hormones ဟော်မုန်းဆေးတွေသုံးရင် အစွမ်းနည်းစေတယ်။
• ကော်ဖီနဲ့ အရက်ကလဲ နည်းစေတယ်။
• Cola ကိုလာအသောက်များတာလဲ အဲလိုဘဲ။
• Soy ပဲပုတ် များတာလဲ အတူတူဘဲ။
• Zinc သွပ်ဓါတ် နည်းရင် နည်းစေတယ်။
• မနက်ခင်း ထွက်တဲ့သုက်ထက် နောက်ပိုင်းထွက်တာက ကလေးရနိုင်စွမ်း ပိုတယ်။ (ကွဲလွဲချက်ကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနတခုက မနက်ခင်း ဆက်ဆံတာကို ပိုအမှတ်ပေးထားတယ်။)
• လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန် ကြာရင် ကလေးရနိုင်စွမ်း ပိုတယ်။
• အသက်၊ ၆ဝ ကျော်လဲ ကလေးရနိုင်သေးတယ်။
ကိုယ့်အထင် တခုထဲနဲ့တော့ သုက်အရည်အသွေး၊ အရေအတွက် မကောင်းဘူလို့ သောက မများပါနဲ့။ လူအများတကာ့ အများစုဟာ ပုံမှန်တွေချည်းပါ။ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မြန်မာ့အာဟာရ ဓါတ်စာတွေမှာ သုက်ပွါးစာတွေ ရှိတယ်။
Semen Analysis သုက်ရည်ရဲ့ အရည်အသွေး
ဆရာ ကျွန်တော်ဆရာဆီကိုစာရေးခဲ့တာ ၅ လတောင်ရှိသွားပြီ။ ကလေးမရနိုင်သေးချင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရှိနေတုံးပါပဲ။ ဘာဆေးဝါးမှလည်း မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ ဆေးခန်းလည်းပြကြည့်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ သုက်ကောင် အရေအတွက်လည်း စစ်ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒီလိုစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ဘာတွေ ပြုလုပ်သွားရမလဲဆရာ။ ကျွန်တော်မှာ သုက်ကောင်တွေမရှိလို့ ကလေးမရနိုင်တာလားလို့ တခါတလေ တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်မသိတာလေးကိုပြောပြစေဆရာ။ သုတ်ကောင်ရေနည်းနေတယ်ဆိုရင် များအောင်လုပ်လိုပ်လို့ ရလားဆရာ။ တကယ်လို့သာ လုံးလုံးမရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ ဆုံးပြီလားဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါဆရာ။
Semen Analysis ဆိုတာ ယောက်ျားမှာ ကလေးရစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သေခြာစေဘို့ အရေးပါတဲ့ စမ်းသပ်နည်းတခု ဖြစ်တယ်။ စမ်းနည်းက ဈေးမကြီးဘူး။ နေရာ အတော်များများမှာ စမ်းရင်ရပေမဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု သိပ်လိုတယ်။ မဟုတ်ရင် အဖြေ ထုတ်တာ မမှန်မကန် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီစမ်းသပ်နည်းကို အထူးပြုတဲ့ Andrology laboratory ဓါတ်ခွဲခန်းမျိုးက စိတ်ချရတယ်။ CASA (Computer assisted semen analysis) နည်းကို သုံးနိုင်ရင် ပိုတိကျမယ်။
သုက်ရည်ကို မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ ကောင်း-မကောင်းမသိနိုင်ပါ။ ပျစ်နေမှ ကောင်းမယ်ဆိုတာ မမှန်ပါ။ ကျဲနေတိုင်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ လူ့ကိုယ်ထဲကနေ ထုတ်ပြီး လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် နာရီဝက် အတွင်းရတဲ့ သုက်ရည်ကို စမ်းတာ ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့လဲ ဒီရက်မတိုင်ခင်က ၃-၄ ရက် လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုဘို့ လိုသေးတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းကနေပေးတဲ့ ခွက်သန့်ထဲကိုသာ သုက်ရည် ထုတ်ရ-ထည့်ရမယ်။ တချို့ ယောက်ျားတွေ စမ်းသပ်ဘို့ သုက်ထုတ်ပါဆိုရင် အတော်ခက်နေတတ်တယ်။ လွယ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ပါ ဆိုတာတွေ မရေးတော့ပါ။ သုက်ရည်ကို သာမန် အခန်းတွင်း အပူချိန်မှာသာထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲ မထားပါနဲ့။ ချက်ချင်း ထုတ်ပေးတာကို စမ်းမဲ့သူက ချက်ချင်း မစမ်းရသေးဘူး။ နာရီဝက် စောင့်ရတယ်။ သုက်ရည် အရေပျော်အောင် စောင့်တာပါ။
နည်းတာ ကိစ္စမရှိပါ။ သုက်-ထုတည် နည်းတဲ့ ရောဂါဆိုတာ ရှားပါတယ်။2to6ml ရှိရင် ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ သိပ်များတာလဲ စမ်းသပ်တဲ့အခါ မကောင်းပြန်ပါ။
အစမှာ ပျစ်နေမယ်။ နာရီဝက်အနေမှာ ကျဲလာမယ်။ ဒါမှ အထဲက သုက်ပိုးတွေ ကောင်းကောင်း လှုတ်းရှာတာကို စမ်းနိုင်တယ်။ အရည် ဖြစ်မလာရင် စမ်းလို့ မကောင်းပါ။ သုက်ထုတ်ပေးတဲ့ Seminal vesicles နဲ့ Prostate မှာ ရောဂါပိုး ဝင်နေရင် အဲလို ဖြစ်တတ်တယ်။
ပုံမှန်က Alkaline ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက အက်စစ်လို မနေဘူး။ အမျိုးသမီးများ ဗဂျိုင်းနားက အက်စစ်ဓါတ် ရှိတယ်။ Seminal vesicle အလုပ်လုပ်တာ မမှန်ရင် သုက်ရည် အက်စစ်လိုနေပြီး၊ ထုထည်နည်းမယ်။ နောက်ပြီး Fructose သကြားဓါတ်လဲ မရှိတာ တွေ့ရမယ်။ ဒီ (ဖရပ်တို့စ်) သကြားဓါတ်ရှိလို့သာ သုက်ပိုးတွေမှာ လှုတ်ရှားနိုင်ဘို့ Energy အားရစေတယ်။ ဒီဓါတ် မရှိဘူးဆိုတာ Ejaculatory duct သုက်ထွက်ပြွန်မှာ တခုခု ဖြစ်နေလို့ပါ။
Microscopic examination အနုကြည့် မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးခြင်း၊
အရေးကြီးတယ်။ သုက်ပိုးတွေဟာ ဖါးလောင်းလေးတွေလို အငန်းမရ လှုတ်ရှားနေကြတယ်။ သုက်ပိုးတိုင်းမှာ ခေါင်းရှိရတယ်။ Head ခေါင်းထဲက Nucleus (နူကလီးယပ်စ်) မှာ Genetic material မျိုးဗီဇဆိုတာ ရှိနေတယ်။ Tail အမြီးပိုင်းကနေ ခေါင်းကို ရှေ့တွန်း ပို့ပေးနေတယ်။ Mid-piece အလည်ပိုင်းမှာ Mitochondria ဆိုတာရှိတယ်။ လှုတ်ရှားစေဘို့ အားကိုဖြစ်စေတယ်။
Sperm count သုက်ပိုး အရေအတွက်၊
20 million sperm per ml ထက်နည်းရင် မကောင်းပါ။ WHO 2010 အဆိုအရ 15 million per ml ကျော်ရင် အကောင်းလို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ 10 million ထက်နည်းရင် အလွန် နည်းတယ်။ Oligospermia လို့ ခေါ်တယ်။ သုက်ပိုး လုံးဝမရှိတာကို Azoospermic ခေါ်တယ်။ မျက်စိနဲ့ကြည့်တုံးက အကောင်းလို့ မြင်ရ-ထင်ရပေမဲ့၊ မှန်ဘီးလူးနဲ့ကြမှ သိရတာ ဖြစ်တယ်။ Vasectomy ကျား အကြော ဖြတ်ထားသူကို စစ်ရင် Azoospermic သုက်ပိုး ရှာမတွေ့ရင် ဒါမှမဟုတ် 100,000 per ml ထက်နည်းရင် ခွဲစိတ်တာ အောင်မြင်တယ်။
Sperm motility သုက်ပိုး လှုတ်ရှားမှု၊
Motility လှုတ်ရှားမှုကို စစ်တော့ 8 million per ml ကျော်ရင် WebMD က နော်မယ်လ် လို့ သတ်မှတ်တယ်။ 60% ကောင်းနေတာကို ဆိုလိုတယ်။ WHO ကတော့ 50% သတ်မှတ်တယ်။ သုက်ပိုးအရေအတွက်ထက် လှုတ်ရှားမှုက ပိုအရေးပါတယ်။ သုက်ပိုးတွေမှာ လှုတ်ရှားနေတာတွေနဲ့ ငြိမ်နေတာတွေ ဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိတယ်။ ရေကူးတတ်သူနဲ့ မကူးတတ်သူတွေ သဘော ဖြစ်တယ်။ လှုတ်ပြန်တော့လဲ ရှေ့ဆီ မြန်မြန် သွားတတ်တဲ့ အကောင်တွေကသာ မ-မျိုးဥဆီ အရောက်သွားနိုင်တယ်။
WHO အဆိုအရ အဆင့်သတ်မှတ်မှု = Grade A အကောင်းဆုံး၊ ရှေ့ကို တန်းတန်းမတ်မတ် သွားနိုင်တယ်။ Grade B ရှေ့တော့ရှေ့ဘဲ ကွေ့ကွေ့ ကောက်ကောက် သွားတယ်။ Grade C အမြီးပိုင်းက လှုတ်နေပေမဲ့ ရှေ့မရောက်ဘူး။ Grade D လှုတ်ကို မလှုတ်ဘူး။ C နဲ့ D တွေကို အညံ့စားတွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။ မလှုတ်တာ ဘာလို့လဲ။ Testis ကျားအစိကနေ အညံ့စားတွေသာ ထုတ်ပေးနေလို့ဘဲ။
Sperm shape သုက်ပိုး ပုံသဏ္ဌာန်၊
Form ဒါမှမဟုတ် Morphology ခေါ်တယ်။ Oval head ခေါင်းက ဘဲဥပုံ၊ Mid-piece အလည်ပိုင်းနဲ့ A long straight tail အမြီးက ရှည်ပြီး ဖြောင့်နေတယ်။ Round heads ခေါင်းလုံးတာ၊ Pin heads ခေါင်းသေးငယ်တာ၊ Very large heads ခေါင်းသိပ်ကြီးနေတာ၊ Double heads ခေါင်းနှစ်လုံးရှိနေတာ၊ Absent tails အမြီးမပါတာတွေ မကောင်းပါ။ Kruger strict criteria အရ Perfect (ပါဖက်) ဖြစ်နေတာကိုမှ (နော်မယ်လ်) သတ်မှတ်တယ်။ ပုံမှန်သုက်ဆိုတာ Normal forms 15% ရှိရတယ်။ အားတက်ဘို့ ကောင်းတာက ၈၅% မကောင်းတာလဲ လက်သင့်ခံတယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။
Sperm clumping or agglutination သုက်ခဲနေခြင်း၊
မှန်ဘီလူးနဲ့ကြည့်ရင် သုက်ပိုးတွေ အချင်းချင်း တွယ်ကပ်နေကြတာကို ပြောတာပါ။ မကောင်းပါ။
Pus cells ပြည် (ဆဲလ်) တွေ ရှိ-မရှိ၊
သွေးဖြူဥတွေ နဲနဲပါနေတာ (နော်မယ်လ်) ပါ။ များနေရင် Infection ပိုးဝင်နေလို့။
Sperm Analysis သုက်ရည်စစ်ဆေးတာနဲ့ Fertility ကလေးရနိုင်တာ၊
• Normal sperm report ရရင် နောက်ထပ်လဲ စစ်မနေနဲ့တော့ ယောက်ျားဖြစ်သူလဲ စစ်ဆေးနေဘို့ မလိုတော့ဘူး။
• Sperm test က မကောင်းဘူးဆိုရင် ၃-၆ လအတွင်းမှာ ၃-၄ ခါ ထပ်စစ်ရမယ်။
• Azoospermia သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ပိုး မရှိသူ ကလေးမရသေးတဲ့ ဖခင်တွေထဲမှာ ၁ဝ% ရှိတယ်။
• Hypogonadotropic hypogonadism ဖြစ်နေရင် Testis ကနေ သုက် မထုတ်နိုင်ဘူး။ Testes တွေကောင်းနေပမဲ့ Hormonal stimulation ဟော်မုန်း အလုပ်မကောင်းရင်လဲ မရပြန်ဘူး။ ဒီ နှစ်မျိုးက ကောင်းနေပေမဲ့ Ductal obstruction ပြွန်ပိတ်နေရင်လဲ ကလေးမရ ဖြစ်စေမယ်။
• Azoospermia ဆိုရင် ထပ်စစ်ရမယ်။ Centrifuge လုပ်ပြီး စစ်မယ်။ ၁-၂ နာရီခြားပြီး သုက် ၂ ခါထုတ်ပေးဘို့ လိုနိုင်တယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
• FSH သွေးထဲက ဟော်မုန်း စစ်ရနိုင်တယ်။ Obstruction ပိတ်နေတာလား၊ Testicular failure အစိကလား သိချင်လို့။ FSH level များနေရင် Testicular failure ဖြစ်မယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် Testis biopsy လုပ်ရအုံးမယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
• သုက်ရည်စစ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း ကလေးရမယ် အတိအကျ ပြောမရဘူး။ အဲလိုလူ ၃ဝ% လောက်မှာ Sperm function အလုပ်လုပ်တာ မကောင်းတာ တွေ့ရတယ်။ Poor semen analysis ထွက်လာပေမဲ့ ကလေး ရသူတွေ ရှိတယ်။
Normal semen ပုံမှန် သုက်ရည်ဆိုတာ -
• White or grey အဖြူကနေ မီးခိုးရောင်ရှိတယ်။ တခါတလေ Yellowish ဝါတာလဲ ပုံမှန်ဘဲ။ Pink or red ပန်းရောင်-အနီရောင် ဖြစ်နေရင် သွေးပါလို့ဖြစ်မယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
• Semen (စီမင်) ဟာ ကျားဆီးထွက်ပြွန်ဝကနေ ထွက်လာပြီးနောက်မှာ ချက်ချင်း ခဲသွားရတယ်။ Sticky, jelly-like liquid စေးကပ်-ကျိခွဲနေမယ်။
• Liquefy again ၅-၄ဝ မိနစ်ကြာရင် တခါပြန်အရည်ဖြစ်လာမယ်။
• Jelly-like globules (ဂျယ်လီ) လို အစိုင်အခဲလေးတွေ ဖြစ်နေတာလဲ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ နဲနဲ ဝါချင်လဲ ဝါနေနိုင်တယ်။
• Health or Fertility problem မခဲနိုင်တာနဲ့ ပြန်အရည်မဖြစ်နိုင်တာဆိုရင် ကလေးမရစေတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• သုက်ပိုးကောင်ရေ 40 million sperm per ml ရှိမယ်၊ အဲဒီထဲမှာ 40% က ရှေ့ဘက်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် သွားနေမယ်၊ 60% က ပုံသဏ္ဌာန် မှန်မယ် ဆိုရင် 40 X 0.40 X 0.60 = 9.6 million sperm per ml အကောင်းဖြစ်မယ်။ တကယ်လို့ သုက်ထုထည်က3ml ရှိရင်၊ 9.6 X3= 28.8 million sperm ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုနေတယ်။
WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက် ၂ဝ၁ဝ အရ ပုံမှန်ဆိုတာ ဒီလို အရည်အသွေးတွေ ရှိရမယ်။
• Sperm count = 15 million sperm per ml ထက်များရင် ပုံမှန်၊ အရင်က ၂ဝ သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ ယေဘုယျအရေအတွက်က 20 - 40 million ရှိတယ်။ Total sperm count စုစုပေါင်း အရေအတွက် တကြိမ်ထုတ်ရင် 39 million per ejaculate ကနေစပြီး နည်းတယ် ပျမ်းမျှ 255 million sperm ရှိသင့်တယ်။
• Motility လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း = ၆ဝ မိနစ်အတွင်းစစ်ဆေးရင် Live spermatozoa သက်ရှိ 60% ရှိရမယ်။ အနည်းဆုံး ၂၅%ဟာ ရှေ့ကို မြန်မြန်သွက်သွက် ကူးသွားနိုင်ရမယ်။ အနည်းဆုံး ၅ဝ%ဟာ နှေးချင်နှေးပါစေ ရှေ့ကို ကူးသွားနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ အနည်းဆုံး 50% ဟာ Forward progression ရှေ့ကို ဦးတည်သွားလာနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။ အနည်းဆုံး 25% ဟာ သုက်လွှတ်ပြီးနောက် မိနစ် ၆ဝ အတွင်းမှာ Rapid progression သွက်သွက်လက်လက် ရှေ့ဘက်ဆီ လှုတ်ရှားနိုင်ရမယ်။ လူတယောက်မှာ အရေအတွက် 20 million sperm cells per ml ထက်နည်းနေပေမဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ 60% ထက်များနေရင် ကောင်းတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။
• Morphology ပုံပန်းသဏ္ဌာန် = >30% ရှိသင့်တယ်။ 4% ထက်ပိုပြီးကောင်းနေရင် ကလေးရနိုင်တယ်။
• Volume ထုထည် = Ejaculation သုက်တခါလွှတ်ရင် 1.0 mL ကနေ 6.5 mL အထိရှိကြတယ်။2mL ထက် မနည်းသင့်ဘူး။ 1.5ml သာရှိရင် Hypospermia နဲ့ 5.5ml ထက် များတာ Hperspermia ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သုက်လွှတ်တဲ့အကြိမ် ဆက်နေရင် ထုထည်နည်းနိုင်ပြီး၊ မလွှတ်တာ သိပ်ကြာနေရင်လဲ များနိုင်တယ်။
• Fructose level ဖရပ်တို့စ်ပါဝင်မှု = WebMD အလိုအရ3mg/mL အနည်းဆုံးရှိရမယ်။
• pH (ပီအိတ်ခ်ျ) WHO အလိုအရ 7.2-7.8 ရှိရမယ်။ (ပီအိတ်ခ်ျ) နည်းရင် (အက်စစ်များရင်) Seminal vesicles ပိတ်နေတာဖြစ်နိုင်ပြီး အက်စစ်ဓါတ်နည်းလွန်းရင် ပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
• Liquefaction အရည်ဖြစ်မှု = 20 min ထက်စောပြီး အရည်ဖြစ်လာသင့်တယ်။ 60 min အထိ ပုံမှန်လို့ သတ်မှတ်တယ်။
• Sperm concentration သုက်ပိုး အနည်းဆုံး 20x106 spermatozoa/ml နဲ့ တခါသုက်လွှတ်ရင် အနည်းဆုံး 40x106 spermatozoa/ml ရှိရမယ်။
• WBC သွေးဖြူဥ = < 1x106/ML
• MOT ဆိုတာ လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ သုက်ပိုးအရေတွက် ဘယ်လောက်ပါသလဲကို တွက်ချက်တာ ဖြစ်တယ်။ (Sperm count + Motility) တွဲထားတာဖြစ်တယ်။ Gradea= >25 micrometer per5sek. at room temperature နဲ့ Gradeb= >25 micrometer per 25 sek. at room temperature ရှိမယ်။ ဒီတွက်ချက်မှုမျိုးက အတုလုပ်ပြီး ကလေးရအောင်လုပ်ရာမှာသာ သုံးပါတယ်။
Semen question သုက်ရည် မေးခွန်း
ကျွန်တော် သုတ်လွတ်တိုင်း သုတ်ရည်ထဲမှာ အဝါရောင် အခဲအရှည်လေးတွေ ပါလာတယ်။ သုတ်လွတ်တဲ့ အကြိမ်ရေ များရင်တော့ အနည်းငယ်သာ ပါလေ့ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကတည်းကဖြစ်နေတာပါ။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ ဆေးစစ်တော့လည်း ဘာပိုးမှမရှိပါဘူး၊ ဖျားတာနာ မရှိပါဘူး။ ဆီးလည်းကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကလည်း ကောင်းပါတယ်။ အသက်က ၂၇ နှစ်ပါ။ ဒီကစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ စိတ်အနှောက်အရှက် ဖြစ်နေပါတယ်၊ အကြံပေးပါဦး။
• White or grey အဖြူကနေ မီးခိုးရောင်ရှိတယ်။ တခါတလေ Yellowish ဝါတာလဲ ပုံမှန်ဘဲ။ Pink or red ပန်းရောင်-အနီရောင် ဖြစ်နေရင် သွေးပါလို့ဖြစ်မယ်။
• Health or Fertility problem ကျန်းမာရေးပြဿနာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ကလေးမရစေမဲ့ပြဿနာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မခဲနိုင်တာနဲ့ ပြန်အရည်မဖြစ်နိုင်တာဆိုရင် ကလေးမရစေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်။
• Ejaculation သုက်တခါလွှတ်ရင် ပျမ်းမျှ ထုထည်2to 5ml ရှိမယ်။
- 1.5ml သာရှိရင် Hypospermia နဲ့
- 5.5ml ထက် များတာ Hperspermia ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။
- ဒါပေမဲ့ သုက်လွှတ်တဲ့အကြိမ် ဆက်နေရင် ထုထည်နည်းနိုင်ပြီး၊ မလွှတ်တာ သိပ်ကြာနေရင်လဲ များနိုင်တယ်။
• WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ပုံမှန်ဆိုတာ ဒီလို အရည်အသွေးတွေ ရှိရမယ်။ Normal sperm count ပုံမှန်-သုက်ရည်-အရေအတွက်ကို ပြောတာဖြစ်တယ်။
- Spermatozoa သုက်ကောင်ရေ 20 million per ml အနည်းဆုံး ရှိရမယ်။
- Semen ထုထည် 2ml အနည်းဆုံး ရှိရမယ်။
- သုက်တခါလွှတ်ရင် Spermatozoa 40 million အနည်းဆုံး ပါနေရမယ်။
- Alive spermatozoa ၇၅% အနည်းဆုံး ရှင်သန်နေရမယ်။
- Spermatozoa ဟာ အနည်းဆုံး ၃ဝ% Normal shape and form ပုံပန်းသဏ္ဌာန် မှန်ရမယ်။
- Spermatozoa ဟာ အနည်းဆုံး ၂၅%ဟာ ရှေ့ကို မြန်မြန်သွက်သွက် ကူးသွားနိုင်ရမယ်။
- Spermatozoa ဟာ အနည်းဆုံး ၅ဝ%ဟာ နှေးချင်နှေးပါစေ ရှေ့ကို ကူးသွားနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။
ဒီအရည်အချင်း၊ အချက်အလက်တွေကလွဲတာကို သုက်-ကျန်းမာရေးပြဿနာလို့ မသတ်မှတ်ပါ။
Profit of the doubt သံသယအမြတ်
• ရဲသားတချို့ မမှန်တာလုပ်ရင် ရဲတပ်ဖွဲ့။ စစ်သားတချို့ မဟုတ်တာလုပ်ရင် စစ်တပ်။ ဘုန်းကြီးတပါး တရားဟောမှားရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ။ အဲလိုကောက်ချက်ချတာ စနစ်မကျပါ။ လွဲမှားနိုင်ပါတယ်။
• မှားတဲ့ရဲသားကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးအပြစ်ပေးရမယ်။ မဟုတ်တဲ့စစ်သားကို စစ်တပ်က စစ်ဆေးအရေးယူရမယ်။ မှားသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကို သံဃအဖွဲ့အစည်းက ဝိနည်းနဲ့အညီ စစ်ဆေးစီရင်တော်မူရမယ်။
• စစ်ဆေး-မေးမြန်း-အရေးယူတာမှန်သမျှ တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်။
• စစ်ဆေး-မေးမြန်း-အရေးယူတာလည်းမလုပ်၊ တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလည်းမရှိရင် စနစ်မကျတဲ့ ကောက်ချက်ဟာ မှားတယ်လို့ပြောမရပါ။
• တရားစီရင်ချက်မချမချင်း တရာခံလို့မပြောရ၊ Benefit of the doubt သံသယအကျိုးခံစားထိုက်တယ်တဲ့။
• မြန်မာပြည်မှာ Profit of the doubt သံသယအမြတ်တွေယူနေတာ များလှပြီ။
Decent speech စကားအရာ အင်္ဂါ (၁ဝ) ပါး
• ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးရေးကြဘို့ မကြာမကြာ နှိုးဆော်ပါတယ်။
• ဘယ်သူကဖြစ်ဖြစ် လူသိရှင်ကြား ဆဲတဲ့စကားကိုလဲ မနှစ်သက်ပါ။
• အထိုင်မတတ်တော့ ဖြဲသလို၊ အပြောမတတ်တော့ ဆဲသကိုလို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
• အဲလိုပြောတာဟာ အဆဲခံရသူကို ထောက်ခံတာမဟုတ်ပါ။ ဆဲတာကို မထောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။
စကားအရာ အင်္ဂါ (၁ဝ) ပါး
၁။ ကာလဝါဒီ = ပြောချိန်ပြောခွင့်သင့်မှသာ ပြောဆိုခြင်း၊
၂။ ဘူတဝါဒီ = ဟုတ်မှန်သောစကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊
၃။ ဓမ္မဝါဒီ = တရားနှင့်စပ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊
၄။ အတ္တဝါဒီ = အကျိုးနှင့်စပ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊
၅။ ပိယဝါဒီ = ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း၊
၆။ မိဟိတပုဗ္ဗဘာဏီ = ပြုံးရွှင်ခြင်းကိုသာ ရှေးဦးပြ၍ပြောဆိုခြင်း၊
၇။ မိတာဘာဏီ = မပိုမလွန်ချင့်ချိန်၍သာ ပြောဆိုခြင်း၊
၈။ အတုရိတဝါဒီ = အဆောတလျင်စွာ မပြောဆိုခြင်း၊
၉။ ပေါရီ = ဓလေ့ထုံးစံကိုလိုက်၍သာ ပြောဆိုခြင်း၊
၁ဝ။ ဝိသဒဝါဒီ = သန့်ရှင်းသေချာ ဋ္ဌာန်ကရိုဏ်းကျအောင်သာ ပြောဆိုခြင်း၊
RFA ကျောင်းသားအရေး ဆွေးနွေးခန်း (၂၅-၁-၂ဝ၁၅) ကောက်နုတ်ချက်
• ကျောင်းသားတွေသာမက အလုပ်သမားတွေ၊ တောင်သူတွေပါ ဆန္ဒပြနေကြတယ်။ အဲတာ လုပ်သင့်လို့၊ လိုအပ်လို့နဲ့ အခြေခံဥပဒေကလည်း ခွင့်ပေးထားလို့ပါ။ ကျောင်းသားအရေးမှာ ကျောင်းသားကပြောတာ တရားတယ်။
• သူတို့တောင်းဆိုကြတာက ပညာရေးကောင်းစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ အစိုးရထွက်ပေးပါလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါ။
• နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးက နယ်စပ်အရေးမဟုတ်တာမှာ ဘာလို့ပါလာသလဲ မသိဘူး။
• ကျောင်းသားတွေအတွက် စိုးရိမ်တယ်။ ခရီးကရှည်သေးတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်တာတောင်မှ ပညာရေး၊ ကျောင်းသားအရေးက ပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူး။
• ၁၉၈၈ ကတည်းက အခုထိ အစိုးရမကြိုက်တဲ့ လူစုလူဝေးတိုင်းကို နည်းမျိုးစုံနဲ့နှိမ်နင်းဖြိုခွဲခဲ့တယ်။ သည်အစိုးရပါပဲ။ ၂ဝဝ၃ မေ ၃ဝ ရက် ဒီပဲယင်းမှာ လူအုပ်နဲ့ သတ်ဖြတ်ရိုက်နှက်တယ်။ သည့်အရင်က ဒေါ်စုနဲ့ ဦးတင်ဦးကား၊ သည့်နောက် မစုစုနွေးတို့ကို စွမ်းအားရှင်ဆိုသူတွေကို ဖြိုခွင်းခိုင်းတယ်။ အခုအစိုးရလည်း သည်လူတွေပဲ။ သူတို့က လက်နယ်မျိုးစုံ၊ နည်းမျိုးစုံ၊ လူမျိုးစုံ (ထောင်သား၊ စွမ်းအားရှင်၊ လုံထိန်း၊ ရဲသား၊ စစ်သား) သုံးတယ်။ လက်နက်အပြင်၊ သင်တန်းတွေပေး၊ အရက်ပေး၊ ဆေးဝါးပေး၊ ငွေတွေပေးပြီးလုပ်တယ်။ အခုကျောင်းသားတွေကို အဲလိုဖြိုခွင်းမှာကို အင်မတန်စိုးရိမ်တယ်။
• ကျောင်းသားဆိုတာ အရွယ်ငယ်ကြတယ်။ သမတကြီးတို့ ကာချုပ်ကြီးတိုလည်း ငယ်ရာကကြီးလာကြတာပဲ။ လူငယ်ဆိုတာ စိတ်တက်ကြွတယ်။ အဲတာကို နားလည်ပြီး၊ စာနာစိတ်နဲ့သာ ဆက်ဆံသင့်တယ်။
• ကျောင်းသားတွေက ပညာရေးအတွက် စကားပြောဘို့တောင်းတာ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး အစိုးရကနေပြောလာနေတယ်။ ဒါပေမဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်းဆိုတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက ဟိုလိနုသည်လိုလိုနဲ့ လွှဲချနေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေနဲ့ အရင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာနဲ့စပြီး၊ မယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ပြင်လိုက်ရင် ကနေ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း ကောက်သလို ပျောက်သလိုဖြစ်တောပါ တည့်လာနိုင်တယ်။
• စာမတတ်သူတွေများမှ အမုပ်ချုပ်ရတာလွယ်တယ်ဆိုနဲ့ နည်းနာကို ၁၉၆၂ ကည်းကကနေ့အထိသုံးနေတုံးပဲ။
• ကနေ့လူထုဟာ စာတတ်တာနည်းချင်နည်းမယ်၊ မှန်တာကိုသိကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဗမာစာ မတတ်ချင်နေမယ်၊ စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်ကြတယ်။
• လူထုကရော အစိုးရကပါ မိဘလိုသဘောထားပြီး၊ ကူညီသင့်ကြတယ်။ ထမင်းကျွေးတာ။ အိပ်စရာပေးတာ တင်မကဘူး၊ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရအောင် စောင့်ရှောက်မှုပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
• ကျွန်တော်နေတဲ့အရပ်မှာ ကျောင်းသားမိဘတွေပါ ကလေးတွေပညာရေးမှာ ဝင်ပါဘို့ဖိတ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ကျောင်းသားအရေး ကျောင်းသားမပါရဖြစ်နေတယ်။
• ကျောင်းသားမိဘတဦးက သူ့သမီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဘေးက တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေနာမည်မပြောတတ်တာ၊ သီပေါမင်းနာမည်ကို ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့သာသိတာ စသဖြင့်ရေးတယ်။ ကျောင်းသားအရေးကို ကျောင်းသားတွေ သာမက ကျောင်းသားမိဘတွေကပါ ကောင်းစေချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ကျောင်းသားမိဘ လှုပ်ရှားမှုတွေပါ ဖြစ်လာသင့်တယ်။
Election Commission ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖျက်သိမ်းရေး
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီတာ၊ တရားမျှတမှုမရှိတာ၊ ဘက်လိုက်မှုရှိတာတွေကို ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေးကွန်ယက်က ဥပဒေပညာရှင် ဦးဋ္ဌေးဦးကနေ RFA မှာ ၂၅-၁-၂ဝ၁၅ ညနေပိုင်းမှာဖြေကြားထား
• ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ဖွဲ့သင့်တယ်။
• ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ခန့်တော့လည်း သမတ၊ ဖြုတ်တော့လည်း သမတဖြစ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အဆုံးအဖြတ်အားလုံးကိုလည်း သူ့လက်ထဲ ထည့်ပေးထားတယ်။
• ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နာဟက၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ဦးပိုင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း၊ သမတနဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်နေလို့ သမာသမတ်ကျသူ၊ ကြားကျသူမဟုတ်ဘူး။
• လက်ရှိကော်မရှင်ဟာ ၂ဝ၁ဝ အတွက်သာဖွဲ့ထားတာ၊ အသစ်ပြန်မဖွဲ့ရသေးလို့ တရားမဝင်ဘူး။
• လက်ရှိဥပဒေမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းခွင့်မရှိ။ သမတတယောက်တည်းသဘောနဲ့ လုပ်ထားတယ်။
• သူဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ တနိုင်ငံလုံး လှည့်လည်သွားလာနေတယ်။
• သူ့ပါတီကိုတော့ ဘာမှမပြောဘူး။ ဒေါ်စုက Burma လို့သုံးတာကို ထောက်ပြနေတယ်။ NLD ကလုပ်တဲ့ သင်တန်းတွေကို ထောက်ပြနေပြီး၊ သူ့ပါတီကလည်း လုပ်တာကြဘာမှမပြောဘူး။ ၂ဝ၁၂ တုံးကတိုင်သူမရှိလို့ တိုင်ရင်အရေးယူမှာလို့ ပြောတယ်။
• ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာ ရိုးသားမှုမရှိဘူး၊ မှန်ကန်မှုမရှိဘူး၊ ဥပဒေနဲ့မညီဘူး။ သူနှုတ်ထွက်ပေးဘို့ လက်မှတ်တွေ ကောက်ယူနေတယ်။
• ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို သက်ရောက်စေမယ်။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။
• လက်မှတ်တွေ ချီးမြှင့်ကြပါခင်ဗျား။
Food for thought ၂ဝ၁၅ စဉ်းစားချက်တချို့
လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က သပိတ်မှောက်မှာ ရာနှုန်းပြည့်သေချာတယ်လို့ တနေရာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြတာတခု တွေ့လိုက်ပါတယ်။ သပိတ်ခေတ်စားနေလို့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တဲ့ သတင်းလားတော့ မသိပါ။ NLD က အခုထိတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ်၊ မဝင်ဘူး မပြောသေးတာလည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုအဆုံးဖြတ်မှာမဆို အပေါင်းရော အနုတ်ပါဖြစ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။ ၂ဝ၁ဝ တုံးက ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက် (NLD ရဲ့ တရားဝင်အသုံးမဟုတ်ပါ) လို့ NLD ကို ဝိုင်းပြီးချီးမြှောက်ခဲ့ကြသူတချို့က တက်ကြွသူတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ကာယကံရှင်၊ မဟာမိတ်၊ အတိုက်အခံ၊ တက်ကြွသူ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ မီဒီယာတို့က တမျိုးတဘာသာစီ ပြောကြ ဆိုကြ ရေးသားကြတာထုံးစံပါ။ တက်ကြွသူတွေထဲမှာ လက်ခုပ်တီးပေးဘို့နဲ့ အော်ဟစ်လှောင်ပြောင်ဘို့သာ လုပ်ကြသူတွေက မနည်းလှပါ။ မီဒီယာမှာလည်း ပေါ်ပင်လိုက်ကြတာမျိုးက တကယ်ရှိတယ်။
ကာယကံရှင်က အရေးအကြီးဆုံးပါ။ NLD ဘယ်လိုလာမလဲ။ စောသေးပါတယ်။ စဉ်းစားထားချက်တွေတော့ ရှိထားမှာ အမှန်ပါ။ နိုင်ငံရေးအဆုံးအဖြတ်ဆိုတာ နောက်ဆုံးမိနစ်မှ ချရတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ ကိုးလအထိတော့ မစောင့်ရနိုင်ပါ။ အလွန်ဆုံးခြောက်လပေါ့။ ဒီနှစ်ဝက်အတွင်း ဖြစ်နိုင်ခြေတွေတွက်ရင် အကောင်းရယ်လို့တော့မမြင်လှပါ။ အကောင်းဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်နိုင်ရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပြောတာ။ အမတ် ၁ဝဝ အရွေးခံရလို့ တယောက် ၁ဝ သိန်းနဲ့မြှောက်လို့ရမှာကိုပြောတာ မဟုတ်ပါ။
၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ကိုဝင်တော့ NLD ကနေ လူထုကိုပြောခဲ့တာ (၃) ချက်ရှိတယ်။ ၂ နှစ်အတွင်း လိုချင်တာတွေ မရသလောက်ပါ။ ရအောင်တော့ အသေအလဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လုပ်အုံးမှာပါ။ မရလို့ သည်အတိုင်းသာဆိုရင် နောက်တခါ မဲတောင်းချင်ရင်တော့ မျက်နှာပူရတော့မယ်။ NLD က ဘယ်တုံးကမှ မျက်နှာပြောင်မတိုက်ခဲ့ပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံကို အဓိကကျတာတွေမပြင်နိုင်ပဲ နောက်ရွေးကောက်ပွဲသာဝင်ရရင်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကနဲ့ ထူးစရာမရှိသလောက်ပါ။ အမတ်ဦးရေ ပိုရနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုက နောက်ကော်မရှင်တွေမှာ ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ရအုံးမယ်။ နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေနဲ့လည်း အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမယ်။ ဟိုနိုင်ငံတွေ၊ သည်ကွန်ဖရင့်တွေမှာ ဟောရ ပြောရမယ်။ အားမနာတမ်းပြာရရင် ခေတ်ဟောင်းသီချင်းကို စတီရီယိုလုပ်ဆိုသလိုနေမယ်။
အာဏာယူထားသူတွေဖက်မှာတော့ လူနည်းနည်းပြောင်းမယ်။ အကျင့်စရိုက်ကတော့ ၁၉၈၈ နဲ့ ခြားနားစရာမရှိပါ။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းကို ဟစ်ပ်ဟော့လုပ်ဆိုသလိုပေါ့။
NLD ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ အာဏာဆုပ်ကိုင်ထားသူတွေက သိပ်ပူပင်မှာမဟုတ်ပါ။ အာစီယန်အိမ်ရှင် နောက်တခါဖြစ်ဖို့က လိုသေးတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အထိုက်အလျှောက်ဆက်ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် လိုတော့ စခန်းသွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါ။ ထိုင်းလိုလည်း ဖြစ်အုံးမှာမဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးမှာ အတော် အားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။ လူတွေရဲ့မကျေနပ်မှုတွေ အဆများစွာတိုးပါမယ်။ ဖိနှိပ်မှုတွေလဲ ဆိုးသထက်ဆိုးပါမယ်။ သေနတ်ပစ်ခံရတာတွေ၊ မီးလောင်တိုက်သွန်းတာတွေ ထပ်လာမှာပဲ။ ရေမွန်းပြီးသေစေတာမျိုး မဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ပါ။
သမိုင်းကို ခေါက်ထားချင်ထားနိုင်ပေမဲ့ ပထဝီဆိုတာကို မစဉ်းစားလို့မရပါ။ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက မျက်စိလည်းကျ၊ သွားရည်လည်းကျ၊ အမြီးကစတိုးဝင်ခဲ့တာ ခါးအထိရောက်နေပြီ။ နောက်တက်မဲ့အစိုးရ သူတို့အစိုးရ လုပ်ဘို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒီလောက်တော့ ခေါင်းဆောင်လုပ်နေသူတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့သူတွေက သိပါတယ်။ ဆိုးတာက အာဏာအကျိုးစီးပွါးအတွက် ဒီအကွက်ကိုသုံးနေခဲ့တာက ကြာလွန်းနေပြီ။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ ရှောင်ချင်အုံးတော့ ရှောင်မရပါ။ မထင်မှတ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်။
NLD သာ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့ရင် NLD မှာ ရှုံးစရာရှိပေမဲ့ မများပါ။ အာဏာယူထားသူတွေလည်း ပြုံးနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။ လူ့ရှေ့မှာတော့ ပြုံးပြမှာပဲ။ ရေသာခိုချင်သူတွေကတော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အခုနေသာလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးလို့ ပြောနေကြတာ။ အဲလိုသာ ဖြစ်လာရင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပနိုင်ငံရေးအစစ်အမှန် ပေါ်လာမယ်။ ဆက်တွေးစရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ သည်ကြားထဲမှာ လုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်သလောက် ကံကောင်းကြပါမယ်။
Victims of Era ခေတ်၏သားကောင်များ
ကွန်မင့် = အထက်တန်းမှာ ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းနဲ့ ပထဝီဘာသာတွေကို Bio ဘာသာတွဲယူတဲ့သမီးက မသင်ခဲ့ရဘူး။ တနင်္သာရီကို မြို့ရော တိုင်းပါရှိတာကို သူမသိဘူး။ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေကို မပြောပြတတ်ဘူး။ သမိုင်းကျတော့လဲ အလောင်းဘုရားနဲ့ ဗန္ဓုလကို ညီအကိုလို့ထင်နေတယ်။ ကုန်းဘောင် နောက်ဆုံး မင်းဆက်လို့မေးရင် မသိဘူး။ မန္တလေးကနေ အင်္ဂလိပ်ဖမ်းသွားတဲ့ဘုရင်ကိုတောင် သူ့ကျွန်မခံပြီရုပ်ရှင် ခဏခဏကြည့်ရလို့ သီပေါမင်းလို့ပြောနိုင်တာ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းနဲ့ ပထဝီကိုတောင် သေသေချာချာမသိတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ကတော့ မြန်မာစာသတ် ပုံမှန်အောင်ရေးဖို့ကတော့ ဝေလာဝေးပေါ့ ဆရာရယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကရေးထားခဲ့တာလေး ပြန်တင်ပါရစေ။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ရွက်နုဝေမဂ္ဂဇင်းက ဆရာအောင်ကြီးရဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ၁၂-၁၂-၂ဝဝ၈ နေ့က RFA ကလွှင့်တဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့များ ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်ရရေးခက်ခဲဆိုတဲ့ သတင်းနှစ်ပုဒ်လုံး တပြိုင်နက်ဖတ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်ဆေးကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲဖြေတော့ အသည်းနေရာကို မှန်အောင်မပြတတ်ဘူးတဲ့။ ၁၉၇၈ နောက်မှာ မြန်မာပြည်ကအောင်တဲ့ ဆေးပညာဘွဲ့ကို အင်္ဂလန် GMC က အသိအမှတ်မပြုတော့ပါ။ အတော်စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်။ ခံပြင်းလည်း ခံပြင်းတယ်။ ကျောင်းသား လူငယ်တွေကို သနားမိတာရောပါတယ်။ စနစ်တကျဖျက်ဆီးခံနေကြရတာပါ။
သမတသစ်ကနေ သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွက် လူရွေးနေတုံးက အကောင်းဆုံးဦးနှောက်တွေဆိုပြီး အမွှန်းတင်ထာ ကြားလိုက်မိကြမှာပါ။ LDC အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းဝင်ဘဝကနေ ရုန်းထွက်နေရချိန်မှာ ဘယ်သူကအုပ်ချုပ်နေနေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဦးနှောက်ကို မသုံးဘူးဆိုရင်၊ အခုအနှစ် ၂ဝ ကျော်လာလို့ လွတ်လမ်းမမြင်သေးတာ ဘယ်ဆန်းမလဲ။
ကျွန်တော်တို့ LDC လူမွဲစာရင်းက လွတ်ဘို့၊ သူများတွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်ဘို့၊ ဖြစ်နိုင်ရင်ကျော်တက်ဘို့ဆိုတာ ဗျူဟာကျတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်ပါ။ စေတနာပါတဲ့အမြင် ရှိတယ်ဆိုရင်၊ လူ့ဦးနှောက်ကောင်းတွေကို အနှစ် ၂ဝ နဲ့သင်ကြား၊ မွေးထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ သိပ်ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေက လူတွေအတွက်ရော၊ ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေအတွက်ရော၊ နောက်ပြီး အမီလိုက်နိုင်ရေး ဦးတည်ချက်ရော စုစပ်ပြီးသကာလ ဗျူဟာအတို-အရှည်ချ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျောင်းတက်ဘူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ။ အတန်းတတန်းမှာ လူတော် ၁ဝ ယောက်လောက်ရှိနိုင်တယ်။ ထူးချွန်တဲ့သူ ၂ ယောက်လောက် ပါနိုင်တယ်။ ကျောင်းတိုင်းလိုလိုကနေ ရွေးထုတ်နိုင်တာမျိုးပါ။ လူတော်လေးတွေတွေ့ပါပြီတဲ့၊ သူတို့ကို သင်ပေးမဲ့ပညာက ခပ်ရှော်ရှော် ဖြစ်နေရင်လဲ၊ မဟုတ်သေးဘူး။ ပညာခေတ်ဆိုပြီး ထောက်ပြနေတာတော့ရှိပါရဲ့၊ လုပ်ပေးရမဲ့သူက မလုပ်တော့ ထမင်းဆာနေတဲ့ လူအနား ဟင်းလျှာကောင်း အနံ့မွှေးပေးနေရင် ဆာနေသူအဖို့ ပိုပြီး ဒေါသကြီးပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်း ထူးခြားတတ်ကြသလို ထူးတာတွေရှိတာပါ။ တီထွင်တတ်တယ်။ အသစ်ထွင်တာထက် မရှိ-ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ကို ဗမာတွေကို အခြေအနေက သင်ပေးထားခဲ့တယ်။ အဲလိုလူစားတွေထဲမယ် စက်ဆရာတွေရော၊ ဆေးဆရာတွေရောပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန်ကားတွေကို သုံးရအောင်ပြင်တဲ့အတတ်၊ အပိုပစ္စည်း မသွင်းလို့ ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ စက်မျိုးစုံဆိုတာတွေကို တန်ဖိုးထား သုံးရတဲ့ဘဝတွေကို အနှစ် သုံးဆယ်မက ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးပြီ။ အခုလဲ ပိတ်ထား-ဆို့ထားတာကို ကျော်ဖြတ်-ခွတက်တဲ့နည်းတွေ တတ်နေကြရပြန်ပြီ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘာကိရိယာပစ္စည်း၊ အဆောက်အဦမှ မယ်မယ်ရရမရှိတဲ့ တောနယ်မှာ တာဝန်ကျတုံးက မေဂျာ အော်ပရေးရှင်းအထိ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ လက်သရမ်းချင်တာ မဟုတ်ပါ။ ဆေးရုံကြီးသွားဖို့၊ လူနာတွေမှာ အချိန်လည်းမရှိ၊ ငွေလည်းမရှိကြပါ။ ငွေရှာနိုင်အုံးတော့ လမ်းမပေါက်ပါ။ ဒီတော့ တောဆရာဝန်တွေအဖို့ ဘယ်လမ်း ရွေးရပါမလဲ။ ထိုင်ကြည့်မလား၊ ကိုင်ကြည့်မလား။ ဒီလိုနည်းနဲ့ တောမှာ တာဝန်ကျတဲ့ ဆရာဝန်တိုင်း အထွေထွေ အထူးကုတွေ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ် (တိုဖယ်) မှ မဖြေဘူးကြပါ။ ခြေစခေါင်ဆုံး ခွဲရတယ်။ ကလေး၊ သားဖွါး-မီးယပ်၊ အရိုး၊ မျက်စိ အကုန်လုပ်နိုင်တယ်။
စာတကြောင်းထဲ ခြုံလိုက်ရင် သဘာဝအရအစွမ်းရှိနေပြီးသား ဦးနှောက်တွေကို သွေးပေး၊ မွေးပေးဘို့ စေတနာ အလျဉ်းမရှိတဲ့ စနစ်ကြီးသည်သာ တရားခံဖြစ်တယ်။
Menstruation and athlete
• နှစ်တနှစ်မှာအစဆုံးကျင်းပတဲ့ သြစတေးလျား အိုးပင်း တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပနေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတဦးချင်း ပြိုင်ပွဲကနေ ကနေ့ထွက်လာတဲ့ အားကစားသတင်းဖြစ်ပါတယ်။
• မိန်းလေး-အမျိုးသမီးတွေ လစဉ်ရာသီလာခြင်းဟာ ကျိန်စာသင့်ခံရတာလား၊ အယူအဆလွဲမှားတာလား။
• ဗြိတိန်နံပါတစ် တင်းနစ်ကစားသမား Heather Watson ဟီသာ ဝတ်ဆန်ဟာ ပွဲစဉ်တစ်ကနေ ထွက်လိုက်ရတာဟာ မိန်းကလေးကိစ္စလို့ အပြစ်တင်ပါတယ်။ တလွဲမတွေးပါနဲ့ Girl things ဆိုတာ ရာသီလာတာကို ပြောလိုက်တာပါ။
• ဒီမေးခွန်းကို အမျိုးသမီး မာရသွန်ချန်ပီယံ Paula Radcliffe ပေါ်လာ ရဒ်ကလစ်ဖ်၊ ဇီဝကမ္မဗေဒပညာရှင် Baroness Tanni Grey-Thompson သွမ်ဆင်၊ ပါမောက္ခ John Brewer ဂျွန် ဘရီဝါတို့နဲ့ ဘီဘီစီကမေးမြန်းပြီး သတင်းလုပ်ထားပါတယ်။
• ပေါ်လာ ရဒ်ကလစ်ဖ် ကတော့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တောင်ချိုးနိုင်ခဲ့လို့ ကျမအဖို့ ရာသီလာတာ ပြဿနာမဟုတ်ပါတဲ့။
• ဗြိတိသျှ တာလတ်အပြေးသမား Jessica Judd ဂျက်ဆီကာ ဂျုဒ် ကတော့ ရာသီရက်အပေါ် မူတည်ပြီး ၁၅ စက္ကန့် ကွာခြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
• ကမ္ဘာ့ ကြက်တောင်ချန်ပီယံ (ဟောင်း) Gail Emms ဂေးလ် အမ် ကတော့ ပြိုင်ပွဲနဲ့တိုက်နေရင် ကိုယ်ဝန် တားထိုးဆေးနဲ့ ရာသီရက်ကိုပြောင်းယူခဲ့ရတယ်လို့ ဝန်ခံပါတယ်။ (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။)
• Paula Radcliffe ပေါ်လာကတော့ တားဆေးစားဆေးသောက်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရာသီမစခင်မှာ ၃ ပါတ်ကြာ သောက်တယ်။ ရာသီလာရင်လဲ နည်းတယ်။ တနှစ်မှာ ရာသီ ၈ ခါပဲလာတယ်။
• သွမ်ဆင် ကတော့ အဲလို တားဆေးနဲ့ရာသီပြောင်းတာက လည်ပင်းနာသလိုပဲလို့ တင်စားပါတယ်။ တားဆေး ထိုးဆေးကြောင့် ရေဓါတ်တွေများမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်မယ်။
• ဇီဝကမ္မဗေဒပညာရှင် Dr Richard Burden ဒေါက်တာရစ်ချတ် ဘာဒင်ပြောတာကတော့ သုတေသနတွေလုပ်ဘို့ လိုပါသေးတယ်တဲ့။
• သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်ရတာ လွယ်တော့မလွယ်ပါ။ အားကစားဆရာဝန်တွေက အများအားဖြင့် ယောက်ျား ဆရာဝန်တွေဖြစ်နေတယ်။ မိန်းမတွေကို သိပ်နားလည်ကြပုံမရဘူး။
Billboard politics ဆိုင်းဘုတ်နိုင်ငံရေး (သို့) ကင်...
Infamous Postage Stamps မကောင်းသတင်းနဲ့ကျော်ကြားတဲ...
Facebook became inaccessible across much of the gl...
Long walking and health ခရီးရှည်လမ်းလျှောက်သူတွေမှ...
RFA ကျောင်းသားအရေး ဆွေးနွေးခန်း (၂၅-၁-၂ဝ၁၅) ကောက်န...
Election Commission ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖျက်သိမ်...
Myanmar imports about 85 pct of western medicines ...
Fake Medicines from China and India (2)
Fake Medicines from China and India (1)
Fake medicines and China ဆေးအတုနဲ့ တရုပ်ပြည်
Fake Medicines come from Neighbors ဆေးအတုတွေ ဘယ်ကေ...
ANC ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း
Insult ဆဲတဲ့ ငစွန်
Myanmar becomes battleground of growing China-U.S....
Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝ...
Spelling error အမှားကို အမှန်ထင်နေတာလား
Numbers say ကိန်းဂဏန်းတွေကပြောသော မြန်မာပြည်
Correction အမှားကို အားမပေးစေချင်ပါ
Thyroid Disorders လည်ပင်းကြီးရောဂါတွေ
Chatting စကားစမြီ ပြောကြသည်
Myanmar's military says will not unilaterally stag...
Social Etiquette လုပ်သင့် မလုပ်သင့်
News from history ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ သမိုင်းထဲကသတင်း
Metronidazole Dosage (မက်ထရို) ဘယ်လိုပေးမလဲ
Under attack ထိုးနှက်ခံနေရသည် NLD
Crowd psychology လူအုပ်ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ
Aung San ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးအစစ်များသို့
Alcohol Writings အရက်ကိုစာနဲ့ဖြတ်မယ်
Acid rain မိုးခါးရေ မသောက်လေနဲ့
Renowned leaders in the school syllabus
Martin Luther King Jr. Day မာတင်လူသာကင်းနေ့
Million-dollar Question သမ္မတကနေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော...
Alcohol abuse အရက်ဘေးက ဝေးကြပါစေ
Bad words ဖရုသဝါစာ
Better Winters ဆောင်းတွေနဲ့နေကြရတဲ့ မြန်မာပြည်ကလူများ
Dissimilar winters မတူတဲ့ဆောင်းများ
Moles မှဲ့ (၁)
Hepatitis B links အသည်းရောင် (ဘီ) ဖတ်စရာများ
Berlin patient ခုအချိန်ထိ HIV ပျောက်ကင်းနေသူ (သို့...
Cancers of Women Reproductive system အမျိုးသမီး မျ...
17-1-2015: Three grand-kids
Anencephaly မွေးရာပါ ဦးနှောက်ချို့ယွင်းချက်
Time wasted မလိုအပ်ပဲ အချိန်တွေကုန်သွားခြင်း
Pinlon Stamp ပင်လုံတံဆိပ်ခေါင်း
Pox ကြောက်စရာ ကျောက်ရောဂါ
Sayawun အစားစား ခြားနားကြသောဆရာဝန်များ
UNA နဲ့ NLD ဆွေးနွေးကြမည်
Uncommon Services တွေ့နေကြမဟုတ်သူများ
Colors count အဖြူ-အမည်း